Posted by သူရိန်(နေရိပ်ညို) at 10:59 AM No comments:
ကျမဟာ ကိုကို့ကို သိပ်ချစ်တယ်။ အသည်းထဲစွဲအောင်ကို ချစ်တာရှင့်..။ ကိုကိုက သိပ်ကြင်နာတတ်တာလေ။
ဒါကြောင့်လည်း ကျမက အချစ်ပိုရတာပေါ့..။ ကိုကို့ကို ကျမက အမြဲတမ်း တမ်းတနေတာ။ သတိရနေတာ..။ လွမ်းနေတာ..။
ကိုကိုနဲ့ မတွေ့ရတဲ့အချိန်တွေဆို ရင် ကိုကိုနဲ့ ချစ်ကြတာတွေ ပြန်တွေးပြီး ရင်ထဲမှာ လှိုက်ဖိုလာရော..။ ကိုကိုနဲ့
ချစ်ကြတာတွေကလည်း သိပ်ကြည်နူးဖို့ကောင်းတာ..။ သိပ် အားရ ကျေနပ်စရာလည်း ကောင်းတယ်လေ..။
ကျမက သူငယ်ချင်းနဲ့ အတူနေတယ်။ သူကလည်း သူ့ရည်းစားဆီကို ကျောင်းပိတ်ရက်ဆို သွားနေတာများတယ်။
သောကြာနေ့ည ဆို သူက သူ့ရည်းစားဆီသွားပြီ။ တနင်္လာနေ့ကျမှ သူက ပြန်လာတာ..။ သူကလည်း သူ့ရည်းစားအိမ်မှာ
နှစ်ပါးသွား။ ကျမကလည်း ကျမ ကိုကိုနဲ့ နှစ်ပါးသွားကြတာလေ..။ သောကြာနေ့ညဆို ကျမရဲ့ ကိုကိုက ရောက်လာပြီ။
နှစ်ယောက်သား ချစ်ဗျူဟာတွေ ခင်းကြတာများ.. အားရပါးရပေါ့။ ကျမရဲ့ အခန်းဖေါ်နဲ့ တနင်္လာနေ့ညဆိုရင် သူ့အတွေ့အကြုံ
ကိုယ့်အတွေ့အကြုံ ဖလှယ်ကြတာများ ပျော်စရာကြီး။
။သူကလည်း သူ့ရည်းစားက သူ့နို့လေးကို ဘယ်လို ဆို့လိုက်တာ..။ အခုထိ နို့ကလေးတွေမှာ ရဲနေတာပဲ..
ဒီမှာကြည့်ပါဦးဆိုပြီး သူ့ နို့လေးနားမှာ သူ့ရည်းစား ကစ်စ် ထားလို့ ရဲရဲလေးတွေ ဖြစ်နေတာကို ပြတတ်တယ်။ ကျမကလည်း
အားကျမခံပေါ့..။ အံမယ် ငါ့ကိုကိုက လည်း ငါ့ကို အချစ်ကြီးလိုက်တာ ဒီမှာတွေ့လားဆိုပြီး ပြန်ပြတာပေါ့။ တခါတလေများ
အဲဒီလို ပြကြရင်း တယောက်နို့လေး တယောက်စမ်းကြည့် ပွတ်သက်ရင်း စိတ်တွေ ဖေါက်ဖေါက်လာလို့.. တကယ်ပါ..
သူ့စောက်ပတ်လေးကို ကျမက လျက်ပေးလိုက်.. ကျမ စောက်ပတ်လေးကို သူက လျက်လိုက်၊ ပွတ်လိုက်နဲ့.. တခါတလေများ
ထားပါတော့.. အဲဒီအကြောင်းကို နောက်မှ ပြောပြမယ်နော်။ အခုတော့ ကျမကိုကိုနဲ့ ကျမတို့အကြောင်းကိုပဲ ပြောမယ်။
အင်း... ကျန်တာတွေတော့ ပြောမနေတော့ပါဘူး။ သူနဲ့ကျမတို့ ချစ်ပွဲဝင် ချစ်ရည်လူးကြတာတွေပဲ ပြောတော့မယ်။
ရှင်တို့စိတ်ဝင်စားကြတာလဲ ဒါပဲ မ ဟုတ်လား။ ပြောပြမယ်။ နားထောင်နော်။
သောကြာနေ့ညဆို ကိုကိုရောက်လာပြီ။ ကိုကိုလာတဲ့အခါ များသောအားဖြင့် ကိုကိုက စားစရာတွေ ဝယ်လာကြတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒါတွေကို ကျမတို့တော့ ချက်ခြင်းမစားဖြစ်ပါဘူး။ ကိုကိုလာတာနဲ့ ကျမကို လှမ်းဖက်လိုက်တာပဲ..။
'ချစ်လေးရေ.. လွမ်းလှပြီကွာ.. ' ဆိုပြီး ကျမပါးလေးတွေကိုနမ်းလိုက်၊ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကိုနမ်းလိုက်။ နောက်တော့
တဖြည်းဖြည်း နဲ့ ကျမရဲ့နားကလေးတွေကို လျှာကလေးနဲ့ လျက်ပေးရင်း ကျမရဲ့ ရင်သားဖေါင်းအိအိလေးတွေဆီ ကိုကိုလက်က
ရောက်လာတာပဲ။ ကျမက လည်း ကိုကိုလာရင် လိုးကြမယ် ဆိုတာကြောင့် အမြဲတမ်း ရေမိုးချိုးပြီးတာနဲ့ ညဝတ်အင်္ကျီ
ပါးလေး ဝတ်ပြီး စောင့်နေတာလေ။ ဆိုတော့ အတွင်းခံတွေ ဘာတွေ ဘာမှ ဝတ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။
ကိုကိုရောက်လာပြီး ကျမကို ဖက်လိုက်ပြီး အဲဒီလို နမ်းပြီး နို့ကလေးတွေကို ပွတ်သက်ရင်း ဖတ်ထားတဲ့အခါများ
ကိုကို့လီးကြီးက ဂျင်းဘောင်းဘီကြားက ရုန်းထွက်ဖို့ကြိုးစားရင်း ကျမရဲ့ စောက်ပတ်လေးကို လှမ်းထိနေပြီလေ။ အဲဒီကတည်းက
ကျမကလည်း စိတ်တွေက ပါလာရော..။
နောက် ကျမကို ဖတ်ပြီး ကိုကိုက အခန်းထဲကို အနမ်းမပျက် ရွေ့သွားပြီး ကျမရဲ့ အိပ်ယာပေါ်ကို ပစ်လှဲလိုက်တယ်။
နောက် ကျမ ရဲ့ အင်္ကျီကို လှန်တင်ပြီး ကျမရဲ့ အိစက်ဖေါင်ြး<ွကနေတဲ့ နို့ကလေးတွေကို အငမ်းမရ စို့ပါလေရော။ ခပ်ဖွဖွလေး စုတ်လိုက်၊ လျှာကလေးတွေ နဲ့ ရင်သားတလျှောက် တို့ကစားလိုက်၊ နို့သီးခေါင်းကလေးကို ငုံစို့လိုက်နဲ့ လုပ်လိုက်ရင် ကျမမှာ အလိုးခံချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွားဖြစ်လာရော။ ကိုကိုနဲ့ကျမက လိုးနေကျ လင်မယားတွေလို ဖြစ်နေတော့ ကျမကတော့ မရှက်တော့ပါဘူး။ ကိုကို့ဘောင်းဘီကြယ်သီးကို လှမ်းဖြုတ်ပြီး ကိုကို့ လီး နွေးနွေးလေးကို လှမ်းကိုင်လိုက်တာပဲ။ ကိုကိုကလည်း သူ့ဘောင်းဘီကို လျှောချ ချွတ်လိုက်ပြီး ကျမချစ်တဲ့ သူ့လီးကြီးကို ပေးကိုင်တာပဲ။ သူကလည်း ကျမစောက်ပတ်လေးကို လှမ်းထိလိုက်တယ်။ နောက် စောက်မွှေးလေးတွေပေါ်မှာ မထိတထိ တို့ကစားရင်း ကျမကို ဝတ်လစ် စလစ် ဖြစ်အောင်
လုပ်လိုက်တာပဲ။ သူကလည်း အဲဒီအချိန်ဆို ဝတ်လစ်စလစ်ကြီးပဲလေ။
ကျမက ကိုကို့လီးကို သိပ်ကြိုက်တာ။ အင်းလေ.. မိန်းကလေးဆိုတာ မပြောရင်သာ ရှိမယ်။ လီးဆိုရင်
ကြိုက်တာချည်းပါပဲ။ ယောက်ျား တွေလည်း ဒီအတိုင်းနေမှာပဲနော်။ စောက်ပတ်လေးများဆို သိပ်လိုးချင်ကြမှာပဲ။
ကျမကတော့ အရင်ဆုံး ကိုကို့လီးကို ပွတ်ကစားရင်း စိတ်တွေြ<ွကလာရင် ငုံချင် စုတ်ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်လာရောလေ။ ကိုကိုကလည်း ကျမရဲ့ ပေါင်တံလေးတွေပေါ် သူ့လက်ကလေးတွေနဲ့ ပွတ်ကစားရင်း ကျမရဲ့ စောက်မွှေးလေးတွေကို တို့ထိလိုက်။ စောက်ပတ်လေးကို ခပ် ဖွဖွလေး အုပ်ရင်း ပွတ်ပေးလိုက်နဲ့..။ သူ့လီးကြီးကလည်း တောင်နေတာပဲ..။ အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါ ကိုကိုက လှဲအိပ်ပြီး ကျမက သူ့အပေါ် ခွထိုင်ပြီး သူ့လီးကို လှမ်းစုတ်လိုက်တာပဲ။ ကျမရဲ့ စောက်ပတ် ဖေါင်း ဖေါင်းလေးတွေကလည်း ကိုကို့မျက်နှာနားရောက်နေပြီလေ..။ ''ချစ်ရယ်.. ချစ် စောက်ပတ်လေးက သိပ်ကောင်းတာပဲ။ ဒီစောက်ပတ်လေးကို မှုတ်ချင်လှပြီကွ..' ဆိုပြီး ကျမစောက်ပတ်ကလေး တွေကို သူ့လျှာလေးနဲ့ လှမ်းလျက်ပါလေရော။ လျှာနုနုလေးတွေနဲ့ ကျမ စောက်ပတ် အနားလေးတွေတလျှောက် မွှေကစားလိုက်ရင် အမလေး အသည်းထဲ အေးကနဲ အေးကနဲပေါ့ရှင်။ ဘယ်လိုကောင်းမှန်းမသိဘူး။
နောက် ကိုကိုက သူ့လက်လေး ၂ ဖက်နဲ့ ကျမရဲ့ စောက်ပတ် အနားလေးတွေကို ဖြဲပြီး စောက်စိလေးကို လျှာကလေးနဲ့
လှမ်းလှမ်း ထိုးလိုက်ရင် အသည်းထဲ အေးကနဲကို ဖြစ်သွားပြီး ကျမမှာ မြောက်တက်သွားသလား ထင်ရတယ်။ အဲဒီအခါမျိုးမှာ
ကျမကလည်း ကိုကိုရဲ့ လီးကြီးကို ပွတ်ပေးရင်း လီးကြီးရဲ့ အရည်ပြားလေးကို စွဲချပြီး ပြောင်ပြီး မာနေတဲ့ ဒစ်ကြီးကို
လျှာကလေးနဲ့ ဖွဖွလေး လိုက်တို့ ကစားလိုက် တယ်။
ပြီးတော့ အဲဒီ လီးကြီးကို ဆုပ်နယ်ပြီး အထက်အောက် ကစားပေးရတာလည်း တမျိုးကောင်းတာပဲ။ သူ့လီးကြီးကို
ကိုင်ထားရင်း အသည်းယားလာတာမို့ လက်တဖက်နဲ့ ခပ်တင်းတင်းလေး ဖိဆုပ်ပြီး အောက်ကို ဆွဲချလိုက် အထက်ကို
ပြန်တင်ပြီး ဂွင်းတိုက်ပေးတယ်။ လီးထိပ် အသားနုနု နီတာရဲလေးကိုတော့ ကျမမှာ ငုံထားရတာ တကယ့်အရသာပါပဲ။
သူ့လီးကြီးတောင်နေတာကို ကျမက လျာကလေးနဲ့ ငုံ လျက်ပေးလိုက်ရင် သူလည်း
''အား.. ကောင်းလိုက်တာ ချစ်ရာ.. ချစ်က သိပ်ကောင်းတာပဲ.. အဲဒီလို ကိုကို့လီးကို မှုတ်ပေးတာ သိပ်ကောင်းတာပဲ..
အား.'' ဆိုပြီး ဖြစ်လာတာပဲလေ။ ပြောလည်းပြောရင်း ကျမစောက်ပတ်ကိုလည်း မှုတ်ရင်းပေါ့။
ကျမကလည်း သူ အဲဒီလိုပြောပြီး ကျမစောက်ပတ်လေးထဲ လက်ကလေးသွင်းပြီး စောက်စိကို လျှာကလေးနဲ့
ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး များ ကစားလိုက်ရင် အရမ်းကောင်းသွားလို့.
''အို.. အား.. အား... ကောင်းလိုက်တာ.. ကိုကိုရယ်.. အမလေး.. ချစ်ရဲ့ စောက်ပတ်လေးက ကောင်းလားဟင်''
''ချစ်ရယ်.. အ၇မ်းကောင်းတာပဲ.. ချစ်ရဲ့ စောက်ပတ် အနားလေးတွေကလည်း လှလိုက်တာ.. အထဲက
အသားလေးတွေကလည်း ပန်းနုရောင်လေးတွေ.. နုဖတ်ပြီး စောက်ရေကျဲကလေးတွေနဲ့ လျှက်လိုက်ရတာ အရသာ သိပ်ရှိတာပဲ..
အကြာကြီး လျက်ပါရစေဦးနော်.. ''
''အို.. ကိုကိုကလဲ... ''
'''လျက်လို့ မဝလို့ပါကွာ.. ချစ်စောက်ပတ်လေးက သိပ်ကောင်းတယ်''
''ပိုပြီ.. သူများစောက်ပတ်တွေလည်း ဒီအတိုင်းပဲ ဟာကို''
''အို.. မတူဘူးကွ.. ကိုကို လိုးခဲ့ဖူး၊ မှုတ်ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ စောက်ပတ်တွေထဲမှာ ချစ်ရဲ့စောက်ပတ်လေးကို
လျှက်ပေးရတာလည်း သိပ် ကောင်းတယ်။ လိုးရတာလည်း အရမ်းကို ကောင်းတာ..'' တဲ့လေ
တကယ်တော့ ဒီအချိန်မျိုးမှာ ဒီလိုအတွေမျိုးရှိတာ အကောင်းဆုံးမဟုတ်လား။ ကြားရတာ သိပ်ကောင်းတာပဲလေ။
ဒါကြောင့် ကျမ ကလည်း အလိုက်သတိနဲ့..
''ချစ်ကတော့ ကိုကို့လီးကိုပဲ အလိုးခံဖူးတာနော်။ ကိုကို့လီးနဲ့ အလိုးခံရရင် အားလုံးပြည့်စုံသွားပြီ...'' လို့
ပြန်ပြောလိုက်တာပဲ။ တကယ်တော့ တခြား ဘယ်လောက်ပဲ အလိုးခံခဲ့ဖူးဖူး လက်ရှိလိုးပေးမယ့်သူ စိတ်ချမ်းသာဖို့
ပြောရတာပဲလေ။ ဒါမှ ၂ ယောက်လုံး ပိုပြီး ကာမ အရသာ ပြည့်ပြည့်ဝဝ ခံစားရမှာပေါ့နော်။
ဒီလိုနဲ့ ကျမတို့က အပြန်အလှန် မှုတ်ပေးကြပြီးရင် ကိုကို့လီးကြီးနဲ့ ကျမစောက်ပတ်တို့ လိုးချင်စိတ်တွေ
အဲဒီအခါ ကိုကို ကျမအပေါ်ကို တက်လိုက်ရော။ ကျမကလည်း အလိုက်သင့် ပေါင်ကလေးကို ဖြဲပေးတာပေါ့။ ကိုကို
''ကိုကို.. လိုးတော့ကွာ... ခံချင်လာပြီ..''
''အင်း.. လိုးမယ်နော်.. ချစ်.. ချစ်ရဲ့ စောက်ပတ်လေးထဲကို ကိုကို့လီးကြီးထည့်လိုက်မယ်နော်..''
''အင်း.. ထည့်လိုက်နော်.. ကိုကို့လီးကြီးက တောင်နေတာပဲကွာ..'
''အင်းလေ.. အဲဒါ ချစ်ရဲ့ စောက်ပတ်လေးကို အရမ်းလိုးချင်လို့ပေါ့..''
''ကိုကို့လီးကြီးက သိပ်ကောင်းတာပဲ.. ချစ်တော့ အရမ်းစွဲနေပြီကွာ..''
''ကိုကိုလည်း အတူတူပဲကွ.. ချစ်စောက်ပတ်လေးထဲကို ကိုကိုလီးကြီး ထည့်လိုက်မယ်နော်''
''အင်း.. ထည့်လိုက်.. အမလေး..
''အား.. ရှီး.. ကောင်းလိုက်တာကိုကိုရယ်.. အထဲကို ဝင်သွားပြီ''
''အင်း.. ကိုကို့လီးထိပ်ကြီးက ချစ်ရဲ့စောက်ပတ်ထဲ ရောက်နေပြီကွ..''
''အို.. အား.. ကိုကို့လီးကြီးကလည်း အပြင်ကထက် ပိုပြီး ကြီးလာသလိုပဲ''
''အင်းလေ... ချစ်စောက်ပတ်ထဲမှာ ကိုကို့လီးကြီးဝင်နေတာ တင်းကျပ်နေတာပဲကွာ..''
''ချစ် .. နည်းနည်း ထပ်သွင်းလိုက်ပြီကွာ...''
''အိုး... အမလေး.. အား.. ကောင်းလိုက်တာ.. ထည့်ထည့်. .. အဆုံးထိသာ ထည့်လိုက်ကွာ.. အ၇မ်းကောင်းတယ်
''အား.... ကောင်းလိုက်တာ ချစ်ရာ... စပြီး လိုးတော့မယ်နော်..''
''အင်း.. လိုး.. ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ ငြိမ့်ငြိမ့်လေး လိုးနော်...''
''အင်း.... အား... ကောင်းလိုက်တာ ချစ်ရာ..'''
အဲဒီလိုတွေ ပြောပြီး ကိုကိုက ကျမ စောက်ပတ်ကို စလိုးတော့တာပဲ။ သိပ်ကောင်းတယ်။ တကယ်ပဲ ဒီလောက်
ကောင်းတဲ့ စည်းစိမ် ဘယ်ရှိမလဲနော်။
ကိုကိုက လိုးရင်းနဲ့ တဖြည်းဖြည်း ပိုမြန်လာတဲ့အခါ ကျမလည်း စောက်ပက်လေးထဲ သူ့လီးကြီး များများဝင်အောင်
ပေါင်ကို ကျယ်ကျယ်လေး ကားပေးတာပေါ့။ သူကလည်း အပေါ်ကနေ စောင့်လိုးနေတာ အားမရလို့လားမသိဘူး။ ကျမရဲ့ နို့
နှစ်ဖက်ကိုလည်း လှမ်းကိုင်ပြီး စောင့်စောင့်လိုးတော့တာပဲ။ အားရပါးရကို လိုးတာ။. ကျမလည်း ခံလို့ကောင်းလိုက်တာ
''အား.. အရမ်းလိုးချင်တယ်ကွာ။ အရမ်းလိုးနေတယ်နော်''
''အင်း. လိုး.. လိုး.. ဒီစောက်ပတ်လေးက ကိုကို့အတွက်နော်..။ တသက်လုံး လိုးမှာလား..''
''လိုးမှာပေါ့ ချစ်ရ.. ချစ်ရဲ့ စောက်ပတ်လေးကို လိုးရတာ ဘယ်တော့မှ အား၇တယ်မရှိဘူး..''
''ကဲ.. ဒါဆို အားရပါးရလိုးနော်''
''လိုးမယ်.. လိုးမယ်.. ဒီတချီပြီးသွားရင် နောက်တချီ လိုးမယ်။နောက်တချီ ပြီးရင် နောက်တချီနော်..''
''လိုးမှာလေ.. ချစ်ရဲ့ စောက်ပတ်ကို ကိုကို့ရဲ့ လီးကြီးနဲ့ အားရပါးရ လိုးမယ်ကွာ..''
''အား.. လိုး ကိုကို လိုးသာလိုး. ကိုကို့လီးကြီးနဲ့ လိုးလို့ကတော့ ချစ်က အမြဲတမ်း ခံမယ်နော်။ ကိုကိုစိတ်တိုင်းကျ
''အား.. ကောင်းလိုက်တာ ချစ်ရာ.. '' လို့ ပြောရင်း ကျမရဲ့ ပေါင်တဖက်ကို သူ့ပုခုံးပေါ် ထမ်းရင်း သူ့လီးကြီးနဲ့
ကျမရဲ့ စောက်ပတ်ကို တဖုတ်ဖုတ်နဲ့ လိုးပါလေရော..။ ခံလို့ကောင်းလိုက်တာရှင်..။
နောက်တော်တော်ကြာတော့ သူလည်း မောလာတာပေါ့။ အဲဒီအခါ
''ကိုကို မောနေပြီလား။ ချစ် အပေါ်က တက်စောင့်ပေးမယ်နော်..''
''အင်း.. အဲဒီလို အလိုက်သိတတ်လွန်းလို့ ချစ်ကို ပိုပြီးချစ်ရတာ..''
လို့ သူက ပြောရင်း ကျမပါးလေးကို နမ်း၊ နှုတ်ခမ်းလေးကိုနမ်းရင်း ဘေးမှာ လှဲအိပ်လိုက်တယ်။ ဒီတော့ ကျမ
လည်း သူ့အပေါ် ခွတက်လိုက်ပြီး အပေါ်ကို ထောင်နေတဲ့ သူ့လီးတောင်တောင်ကြီးကို လှမ်းကိုင်ပြီးကျမရဲ့ စောက်ပတ်နဲ့
တေ့ပြီး ထိုင်ချလိုက်တယ်။ သူ့လီးကြီးက ကျမရဲ့ စောက်ပတ်ထဲကို စွပ်ကနဲ ဝင်သွားပါလေရော..။
'အား.. ကောင်းလိုက်တာ ချစ်ရာ..''
''လိုး.. လိုး.. အားရပါးရလိုး.. အပေါ်က တအားသာ စောင့်နော်..''
''အင်း. စောင့်မယ်... ချစ်ရဲ့ စောက်ပတ်လေးနဲ့ ကိုကိုလီးကြီးပေါ်ကို တအား စောင့်လိုးမယ်ကွာ..''
''အင်း.. လိုးသာလိုး ချစ်..''
ဆိုပြီး ကျမလည်း သူ့လီးကြီးအပေါ်မှာ ခွထိုင်ပြီး တစွပ်စွပ်နဲ့ စောင့်ပေးလိုက်တယ်။ သူကလည်း အောက်မှာ ဇိမ်
တွေ့နေတဲ့အပြင် ကျမရဲ့ နို့ကလေးတွေ ခုန်ဆွ ခုန်ဆွ ဖြစ်နေတာကို လှမ်းလှမ်းဆွဲလိုက်သေးတယ်။ ကျမလည်း စိတ်ရှိ
လက်ရှိ အားရပါးရ သူ့လီးကြီးပေါ် စောင့်စောင့်ပြီး လိုးပစ်လိုက်တယ်။
သိပ်ကောင်းတာပဲ။ ကျမလည်း စောင့်ကောင်းကောင်းနဲ့ စောင့်လိုက်တာ အဲယားကွန်းဖွင့်ထားတဲ့ အခန်းထဲမှာ ချွေး
ပြန်တဲ့အထိပဲ။ အဲဒီအခါကျတော့ ကျမလည်း မောပြီး ကိုကို့အပေါ် လှဲအိပ်လိုက်တယ်။ ကိုကိုကလည်း ကျမကို လှမ်းဖက်
ထားပြီး ဘေးကိုစောင်းလိုက်တယ်။ ပြီးတော့
''နောက်ကနေ လိုးဦးမယ်ချစ်ရာ.. ဖင်ကုန်းပေးထားနော်..''
ဆိုပြီး ကျမလည်း လေးဘက်ထောက်ပေးလိုက်တယ်။ သူကလည်း သူ့လီးနီတျာတျာကြီးကို ကျမစောက်ပုတ်ထဲ ထိုးလိုက်
တာ လျောကနဲ ဝင်သွားတာပါပဲ။ သူက နောက်ကနေ ကျမ စောက်ပတ်လေးကို လိုးရင်း နို့ကလေးတွေကို လှမ်းဆွဲထား
တယ်။ ပြီးတော့ သူလည်း အကြာကြီး စောင့်စောင့်ပြီး လိုးနေလိုက်တာများ ဘယ်လိုကောင်းမှန်းကို မသိဘူး။
ကောင်းလွန်းလို့ တော်တော်ကြာကြာလိုးပြီးပြန်တော့ ၂ ယောက်လုံး မောနေပြီ။ လိုးလို့ကလည်း ကောင်းတုန်းလေ။
ဒီတော့မှ တခါ ကျမက လှဲအ်ိပ်ပြီး သူက ကျမအပေါ်တက်ပြီး ကျမရဲ့ ခြေထောက်လေး ၂ ချောင်းကို ဖြဲကားလိုက်တယ်။
ကျမရဲ့ စောက်ပတ်လေးက ပြဲပြီး ဖေါင်းနေတော့တာပေါ့။
အကြာကြီး လိုးထားတော့ ကျမရဲ့ စောက်ပတ် အနားသားလေးတွေကလည်း ခပ်ဟဟလေးဖြစ်နေပြီး ကိုကို့လီး
တောင်တောင်ကြီးနဲ့ လိုးပါတော့လို့ ဖိတ်ခေါ်သလို ဖြစ်နေတယ်လေ။
ကိုကိုကလည်း ကျမရဲ့ စောက်ပတ်လေးထဲ သူ့လီးကြီးနဲ့ စွပ်ကနဲ ထိုးလိုက်တယ်။ ကျမရဲ့ စောက်ခေါင်းထဲမှာ
ပြည့်တင်းပြီး ကောင်းလိုက်တာ။ တကယ်ကို ကောင်းတာပါ။ အ၇မ်းခံလို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပေါ့။
ကိုကိုကလည်း ကျမစောက်ပတ်ထဲ သူ့လီးကြီးဝင်တာနဲ့အချိန်ဆွဲမနေတော့ပဲ တခါတည်း စောင့်စောင့်ပြီးတော့ကို
လိုးပါတော့တယ်။ သူ့လီးကြီးကလည်း ကျမစောက်ပတ်ထဲ ဝင်လိုက် ထွက်လိုက်နဲ့..။ တဖြည်းဖြည်း ကျမလည်း ခံရတာ
ကောင်းလွန်းလို့ ပြီးချင်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့်.
''အား.. ကိုကိုရယ်.. ကောင်းလိုက်တာ.. လိုးလိုး..နာနာလိုးနော်''
''အင်း လိုးမယ် လိုးမယ်.. ချစ်ရဲ့ စောက်ပတ်လေးကို တအားလိုးတော့မယ်နော်''
''လိုး ကိုကိုရေ.. ချစ်တော့ အ၇မ်းကောင်းနေပြီ..''
''အင်း.. ချစ်ရဲ့ စောက်ပတ်လေးကို တအားစောင့်ပြီးလိုးပြီကွာ.''
''လိုး.. လိုး.. အားရပါးရလိုး..''
''လိုးနေပြီနော်။ တအားလိုးနေပြီ.. ကိုကို့လီးကြီးနဲ့ အရမ်းကို လိုးနေပြီနော်..''
''အား.. အား.. ကောင်းလိုက်တာ ကိုကိုရယ်.. အရမ်းလိုးနော်..
''အင်း. လိုးတယ်.. အရမ်းလိုးတယ်.. ကောင်းလိုက်တာချစ်ရယ်..'' ဆိုပြီး သူက တအားတအားကို စောင့်စောင့်ပြီး
လိုးလိုက်တာ ကျမမှာ ပြီးချင်လာတာမို့.. ကိုကို့ကို..
''အား.. ကိုကို.. မြန်မြန်လိုး.. လိုး.. လိုး.. '
''အင်း.. လိုးမယ်.. တအားစောင့်လိုးမယ်..
'အား.. ကောင်းလိုက်တာချစ်ရယ်.. ပြီးတော့မယ်နော်..''
''အင်း ချစ်လဲ ပြီးတော့မယ်.. လိုးလိုး... '' ဆိုပြီး ကျမလည်းအော်လိုက်မိတော့တယ်။
ကိုကိုကလည်း အတင်းစောင့်စောင့်ပြီးလိုးလိုက်တာ ကျမလည်း အရမ်းကောင်းလို့ မထိန်းနိုင်တော့ပဲ ကျမစောက်
ပတ်ထဲက စောက်ရည်တွေ ထွက်ကုန်ပါတော့တယ်။ ကိုကိုကလည်း တဖြန်းဖြန်းနဲ့ သူ့ထီးထဲက သုတ်ရေတွေ အများကြီး
ထွက်လာပြီး ကျမရဲ့ စောက်ပတ်လေးနဲ့ ကိုကို့လီးတို့ လိုးတာ ပြီးသွားပါတော့တယ်။
အမလေး လိုးလို့လည်း ပြီးရော ကျမတို့မှာ ဖတ်ဖတ်ကို မောသွားတော့တာပေါ့။
ဒါနဲ့ ရေပြန်ချိုးကြ၊ ကိုကိုဝယ်လာတဲ့ စားသောက်စရာတွေကို စားလိုက်ကြနဲ့ အမောပြေတော့ နောက်တချီ၊ တရေး
အိပ်ပြီး နောက်တချီ၊ မိုးလင်းတော့ နောက်တချီ.. လိုးလိုက်ကြ စားလိုက်ကြ အိပ်လိုက်ကြနဲ့ တနင်္လာနေ့မနက်ကျမှပဲ ကျမ
တို့ရဲ့ အချစ်ပြိုင်ပွဲကြီး အဆုံးသတ်ပါတော့တယ်။
ညကျရင် ပြန်လာမယ့်အခန်းဖေါ် သူငယ်ချင်းနဲ့ ကိုကိုနဲ့ ချစ်ကြတာတွေ ပြန်ပြော၊ သူကလည်း သူ့ရဲ့ အလိုးခံခဲ့တာတွေ
Posted by သူရိန်(နေရိပ်ညို) at 1:20 PM No comments:
Myanmar Books (18+) / Re: ဒုတိယနတ်သမီး (၁၈+)
« Last post by Had3s on Today at 03:06:35 AM »
ဒေါ်နုနုရှိန် လက်တွေတုန်နေသည်။ဒီပစ္စည်းကြီးကို ဘာလို့ အိတ်ထဲကနေထုတ်ကြည့်ချင်စိတ် ဖြစ်လာရသည်ကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းနားမလည်နိုင်ရှာပေ။ တုန်ရီသောလက်တွေနှင့်
ဆွဲထုတ်လိုက်ချိန်တွင် အသက်အောင့် ထား မိသည်။ ထပေါက်တော့မည့် မြွေတကောင်ကို ကိုင် ထားရသလို သတိကြီးစွာ ဖြင့် ပင့်မြှောက်ကြည့်လိုက်၏။ ရာ ဘာသား၏ ချောမွေ့ မှုကြောင့် ချွေးစေးတွေ ပြန်နေသည့်လက်ထဲကနေချော်ပြီး လွတ်ကျမသွားအောင် ခါး လည် ကနေ တင်းတင်း ညှစ်ဆုပ်ထားမိသည်။
ထိပ်ဖျားက ထွက်ပြူလာစ မှိုပွင့်ကြီးတပွင့် အလားပင်။ အရစ်၏ နောက်တွင်အောက်ကိုပြန်ချိုင့် ပြီး ဆင်း လာ သည့် တလျောက်တွင် သွေးကြောလိုမြောင်း တွေဖုထနေ၏။
ဒေါ်နုနုရှိန်၏ တထွာ မကအောင်ရှည်လျားသည့် လိင်တံက လက်နှင့်ဆုပ်လို့ မနိုင်အောင်ကြီးထွားသည်။ ပိန်ပိန်းပါးပါး စန္ဒာတယောက်ဒီ လောက်ကြီးသည့် ဟာ ကြီးကို သူမ၏
ပစ္စည်းလေးထဲသို့ ၀င် အောင်ဘယ်လိုသွင်းသနည်းဟု တွေးကြည့်ရင်း ဒေါ်နုနုရှိန် ရင်တွေတဒိန်း ဒိန်း ခုန်လာသည်။ အသက်ရှူရတာလည်း မမှန်တော့ဘဲ အလိုလိုမောလာ၏။
ကိုင်ကြည့်တာတောင် ဒီလောက် ဖြစ်ရလျှင် အထဲကိုသာထည့်လိုက်လို့ကတော့ အသက်ရှူရပ်သွားနိုင်သည်ဟု ထင်မိသည်။
မရည်ရွယ်ပါပဲ ဒေါ်နုနုရှိန်၏ လက်တဖက်က သူမ ပေါင်ကြားထဲရောက်သွားသည်။ ထမိန် အသားပျော့ပျော့ ပါး ပါးမှာ အတွင်းခံ လည်းမပါလို့ အရည်တွေရွှဲနေသည့် ဖေါင်းဖေါင်းမို့မို့
ရတနာတွင်းကို တိုက်ရိုတ် နီးပါးစမ်းမိသည်။ ဘာကြောင့် အရည်တွေထွက်နေရသနည်းဟု တွေးရင်း ရှက်ရွံ့စွာဖြင့် လက် ထဲက ဟာကြီးကို အိတ်ထဲပြန် ထိုး ထည့်ပြီး သူ့နေရာ
စန္ဒာ့ အခန်းထဲက ပြန်ထွက်လာသည့် ဒေါ်နုနုရှိန်၏ ခြေလှမ်းတွေက ယိမ်းယိုင်လေးလံနေသည်။ ခေါင်းတွေ က လည်း ရီဝေနောက်ကျိနေ၏။
“နုနု နေ မကောင်းဘူးလား”
လမ်းမှာ တွေ့သည့် ဒေါ်အေးစိန်၏ အမေးကို တိုးတိမ်စွာဖြေလိုက်ပြီး ဒေါ်နုနုရှိန် အိပ်ခန်းထဲ ၀င် လာခဲ့သည်။ ကုတင်းဘေး မှန်တင်ခုံက မှန်မှာ အဆီပြန်နေသည့် မျက်နှာnot allowedယာနှင့်
မိမိ ကိုယ်မိမိ ပြန်မြင်ရသည်။
ပါးစပ်က ဖွင့်ဟ ညည်းလိုက်မိသည်အထိ စိတ်ပျက်နေရပါသည်။ ဒီအရွယ်ရောက်မှ မဟုတ်မဟပ် ပစ္စည်းတခု၊ အကြောင်းအရာတခုနှင့် ပတ်သက်ပြီး စိတ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေရ သည့်
ကိုယ့်ကိုယ်ကို လည်းနားမလည်ပါ။ အိပ် ယာပေါ်ခွေခွေလေး လှဲချလိုက်ရင်း လက်က ပေါင်ကြားကို စမ်းမိပြန်သည်။ စိုစွတ်သည့် အထိအတွေ့က ဒေါ်နုနု ရှိန်၏ ရင်ခုန်သံတွေကို မြန်
စေပြန်၏။ စိတ်ပေါက်ပေါက်ရှိတာ နှင့် စိုနေသည့် အရည်တွေကို ထမိန်နှင့် ပွတ်ကာ သုတ်လိုက် ၏။ ပြောင်စင်သွားပြီဟု ထင်လိုက်မှ နားလိုက်သည်တွင် လူကလည်းမောနေသည်။
အမောဖြေနားနေရင်း မျက်လုံးကို မှိတ်ထားသော်လည်း ဒေါ်နုနုရှိန်၏ အာရုံက ပေါင်ကြားထဲ မှာပဲ ရှိနေသည်။ တချက်တချက်တွင် လိင်တံ အတုကြီးကိုလည်း မြင်ယောင်နေ၏။
ထိုအချိန် တွင် မိမိ၏ သဘာဝတွင်းလေး ထဲ မှာလည်း အရည်တွေ တစိမ့်စိမ့် ဖြစ်လာပြန်သည်ဟု ထင် မိသည်။ စိတ်ရှုပ်ရှုပ်နှင့် ထမိန်ကိုဖြေလျော့လိုက်ပြီး လက်နှင့်ထိုးစမ်းမိသည်။
လမ်းတ၀က်မှာ တွန့်သွားသေးသော်လည်း စိတ်ကိုတင်းပြီး အောက်ကို ထိုးဆင်းလိုက် ရ၏။
ချော်ကျိကျိ နှုတ်ခမ်းသားတွေက နှုးညံ့လွန်းသည်။ အကွဲကြောင်းထိပ်က အဖုလေးကို ဖိမိသော အခါ ဒေါ်နုနုရှိန် တွန့်သွားသည်။ မိန်းမတွေ၏ အစေ့ ဆိုတာဒါကိုခေါ်ကြောင်း အရင်ထဲ
က သိပေမယ့် တခါမှလက်နှင့် တို့ထိမ ကြည့် ဖူးပါ။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရင်း ထိမိ တိုက် မိတာလောက်ပဲ ရှိသည်။ အဲဒီအခါတွေတုန်းက ဘယ်လိုမှ စိတ်ထဲ မှာမရှိခဲ့သည့်နေရာက အခု
ကျမှ တို့ထိလိုက်သည်နှင့် ကြက်သီးတွေ တဖျန်းဖျန်းထသွားရသည်။
လက်ညိုးထိပ်ဖျားလေး နှင့် သုံးလေးကြိမ်ထပ်ပွတ်ကြည့်လိုက်မိပြီးနောက်တွင် ဒေါ်နုနုရှိန် ရင် ထဲက တလှိုက် လှိုက်တက်လာသည့် ဝေဒနာကြောင့် ပါးစပ်က ခပ်ဖွဖွလေး
ညည်းလိုက်မိသည်။ ထိုလှိုက်မောဖွယ်ရာခံစားမှုက ဒေါ်နုနုရှိန်ကို ဖမ်းစားလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် အိပ်ယာပေါ်တွင် တစောင်းကွေးကွေးလေး လှဲရင်း အဖုလေးကို အဆက်မပြတ်
“အင်း .....အင်း .....အင်း.....အ....အား”
လက်ချောင်းလေးတွေကိုရပ်တန့်လိုက်ဖို့ ဒေါ်နုနုရှိန်မှာ ခွန်အားမရှိတော့ပါ။ ရပ်တန့်ဖို့စိတ်ကူး လည်းပေါ်မလာပဲ ခံစားမှုနောက်ကိုသာ ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်သွားမိသည်။
အားနေ သည့် လက်ဖြင့် ခေါင်းအုံး အစွန်းကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆွဲလိမ်ရင်း အော်ညည်းနေမိ၏။ ပေါင် ကြားဆီ ကနေတကိုယ်လုံးကို ပြန့်လွင့်တက်လာသည့် ဝေဒနာက မိန်းမူး
ဖွယ်ကောင်းလွန်းလှ သည်။ ခံစားမှု ဒီနေမြင့်တက်လာသည်နှင့် အမျှ ဒေါ်နုနုရှိန်၏ အော်ညည်း သံက ပိုကျယ်လောင် လာသည်။ ဒါကိုလည်း ဒေါ်နုနုရှိန် မသိတော့ မျက်လုံးထဲမှာ
တိမ်စိုင်တိမ်လိပ် တွေသာမြင် သည်။ တိမ်စိုင်တွေကြားမှာနိမ့်တခါ မြင့်တလှည့်ဖြင့် ညင်ညင်သာသာလေး ရွေ့လျားနေသလို စိတ်မှာ ခံစားရ၏။
“အီး ..ကောင်းလိုက်တာကွယ်......အား ....အင်း”
ခံစားချက် အသစ်အဆန်းတခုက ဒေါ်နုနုရှိန်ကို အပြင်းအထန်ဖမ်းစားလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ခုနေ အနားကိုလူတ ယောက် ရောက်လာ ရင်တောင်ဒေါ်နုနု ရှိန်မသိတော့။ ဒါပေမယ့် သူမ၏ ရင်သားတွေ တင်းမာလာတာကိုတော့ သိသည်။ လှိုက်မောရခြင်း နှင့် အတူရင်က လည်းမွန်းပြီး ကြပ်နေသည်။ မတော်သည့် ဘရာစီယာ ကြပ်ကြပ်ကို ၀တ် ထားရသလို ရင်သားတွေက မလွတ်မလပ်နှင့် တမျိုးကြီး ဖြစ်နေသည်။ ထို့ကြောင့် ခေါင်းအုံးစွန်း ကို ဆွဲ ထား သည့်လက်ကို ဖြုတ်ပြီး ရင်ဘတ်ကို ညှစ်မိသည်။ အင်္ကျီနှင့် ဘရာစီယာခံနေလို့ ညှစ်ရတာမကောင်းပါ။ ပိုပြီး လွတ်လပ်သွားစေရန် ကြယ်သီးတွေကိုပါ ဖြုတ်ချလိုက်ပြီး ဘရာ စီ ယာ ခွက်ကိုပါ အပေါ်ပင့်တင်လိုက်မိ၏။ ဒီတော့မှ လွတ်လပ်စွာဆုပ်နယ် နိုင်သွားသည်။ ကြက်သီး ထသလို တင်း မာနေသည့် နို့သီးဖျားကလေး ကို ညှစ်ရင်း အောက်ကို ပွတ်ရတာ ပိုထိသည်ကို သွားတွေ့၏။
“အား ...ဘယ်လို ကြီးလဲ”
ခံစားမှု ရေချိန်က တရိပ်ရိပ် နှင့် မြင့်တက်လာသည်။ သူမ၏ ရတနာတွင်းလေး ထဲက ကြွက်သား တွေ ရှုံ့ချည်ပွ ချည် ဖြစ်လာတာကိုလည်း ဒေါ်နုနုရှိန်သိနေ၏။
လေထဲသို့ လွင့်မြောက်တက်သွားပြီးချာချာလည်၍ ပြန်ကျလာသလို စိတ်ထဲမှာခံစားလိုက် ရပြီးနောက်တွင်တော့ ဒေါ်နုနုရှိန် ပျော့ခွေကျသွား၏။ သူမ၏ တကိုယ်လုံးမှာ အားအင်လုံးဝ မရှိတော့ဘဲ ၀ါဂွမ်းစလေး တခု လေထဲမှာ လွင့်မျောနေသလို တရိပ်ရိပ်နှင့် လွင့်နေ၏။ မော လည်းအရမ်းမောနေသည် အသက်ကိုပင် ဖြေးဖြေးလေး ရှူ နိုင်သည်။ အစေ့ကိုလည်း မပွတ် နိုင်တော့၊ ရင်သားကိုလည်း မညှစ်နိုင်တော့။
တငြိမ့်ငြိမ့် တမူးမူးခံစားမှု တွင်မိန်းမောနေခိုက် နောက်ကျောဖက်က ဒေါ်အေးစိန်၏ အသံကြောင့် အိပ်မက်က နိုး သလို ဆတ်ကနဲဖြစ်သွားသည်။ ကံကောင်းထောက်မ စွာဖြင့် ၀င်ပေါက်ကို ကျော ပေးထားလို့ အခြေအနေ အရပ် ရပ် ကို ဒေါ်အေးစိန်မမြင်နိုင်ပါ။ တံခါးကို ချက်မချခဲ့ မိခြင်း နှင့် ဒေါ်စိန်ရီ ၀င်လာတာကို မသိလိုက်ခြင်း အတွက် ကိုယ့်ဖာသာကျိတ်၍ အပြစ်တင်ရင်း ချော်လဲ ရောထိုင် အိပ်နေသလို ဆက်ပြီးဟန်ဆောင်နေလိုက်သည်။ ပွင့်ဟ နေ သည့်ရင်ဘတ် ကိုလည်း လက်နှစ်ဖက်ယှက်ပြီး ကွယ်ထားလိုက်၏။ ဒေါ်အေးစိန်ကလည်း ဒီဖက်ကို မလာပါ အိပ် နေသည်ထင်ပြီး ပြန်လှည့်ထွက်သွား၏။
« Last post by Had3s on Today at 03:03:55 AM »
အခန်းသာအောင်းနေသော်လည်း ဘာမှ မယ်မယ်ရရ မလုပ်ဖြစ်ပါ။ စာဖတ်လိုက်၊ အိပ် ယာ ထဲမှာလှဲလိုက် နှင့် အ ချိန်တွေကုန်သွားသည်။ ယနေ့ခေတ် မိန်းကလေးတွေ
အကြောင်းလည်း စဉ်းစားနေမိ၏။ ဒေါ်နုနုရှိန် တို့ခေတ်က ရည်းစားဘ၀ မှာနယ်ကျော်ခြင်း မရှိမဟုတ်၊ ရှိကြပါသည်။ ဒါပေမယ့် အခုလိုမျိုးမဟုတ်ဟု ထင်၏။ တလော တုန်း က
သူငယ် ချင်းဆရာမ တယောက် အလည်လာစဉ်ပြောပြသွားသည့် သူမ၏ တပည့်တွေက ယောက်ျားလေး ရောမိန်းကလေးပါ တအိမ်ထဲတူတူငှားနေပြီး ကျောင်းတက်ကြသည့်
အကြောင်းပြောသွားစဉ်က သိပ်မယုံချင် သ လိုဖြစ်ခဲ့ တာကိုပြန်တွေးမိသည်။
“ပြောလဲရမှာမှ မဟုတ်တာ၊ ငါတို့တုန်းကလို အစိုးရကျောင်းဆောင်တွေလဲ မရှိတော့ဘူးဆို တော့ သူတို့ဖာသာ အပြင်မှာနေချင်သလို နေနေကြတာ တို့လဲ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ”
နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းတက်တုန်းကတော့ သမီးရည်းစား အတူတူနေကြတာမဆန်းပါ။ ဒါသူတို့ ယဉ်ကျေးမှု့ လို့ပဲ နားလည်ခဲ့ သည်။ အခုတော့ ဒီကိုလည်း ထိုယဉ်ကျေးမှု ကူးစက်
လာသည့် အနေအထားဖြစ်နေသည်။ မိမိ အ ဆောင်က မိန်းကလေးတွေကတော့ ဒီလိုမဟုတ် ဟု ထင်ထားမိတာ အလွဲကြီးလွဲနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိလိုက် ရ ပါသည်။ အဆောင်
မှနေ ကျောင်း သို့မဟုတ် အလုပ်ကို ထွက်သွားပြီးသည့် အချိန်နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဒေါ်နုနုရှိန် ဘယ်လိုမှ မတတ်နိုင်ပါ။ အဆောင်ပြန်ဝင်လာမှ သူမတို့ကို ထိန်းချုပ်လို့ရပေမည်။
နောက်ဆုံးတော့ အဆောင်မှာမဟုတ်တရုတ်လုပ်မနေ ရင်ပြီးတာပဲဟု စိတ်ကိုလျှော့ချလိုက်ရသည်။ ဒါပေမယ့် စန္ဒာ့လို ကိစ္စမျိုးကျတော့ ဘယ်လို ဆုံးဖြတ်နားလည်ရမည်ကို ဒေ
ါ်နုနုရှိန် မတွေးတတ်ပြန်ပါ။ အဆောင် စည်း ကမ်းကိုဖေါက် ဖျက်ပြီး ယောက်ျားခေါ်လာခြင်းလည်း မဟုတ်၊ သက်မဲ့ပစ္စည်းတခုကို အသုံးချပြီးသူမ၏ ဆန္ဒကို ဖြေဖျောက်ခြင်းသာဖြစ်
ရာ တားမြစ်ချင်ရင်တောင် ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ တားမြစ်ရမည် မှန်းလည်း ဒေါ်နုနုရှိန် အဖြေမ ထုတ်နိုင်ပါ။
“တော်ပြီ၊ လုပ်ချင်ရာလုပ်ကြတော့၊ ငါ့ အဆောင်မထိခိုက်ရင် ပြီးတာပဲ”
ယတိပြတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးနောက် ရှုပ်ထွေးနေသည့် ဦးခေါင်းနှင့် တနေကုန်ညောင်းချိနေသည့် ကိုယ်ခန္ဓာကို ဖြေလျော့ရန် ရေချိုးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
အ၀တ်အစားချွတ်ရင်း မှန်ထဲမှာ ကိုယ့် ကိုယ်ကို သေသေချာချာ ပြန်ကြည့်မိသည်။
၀ါဝင်းပြည့်ဖြိုးသည့်ရင်သားတွေက ခရမ်းရောင်ဘရာစီယာထဲက အပြင်ကိုအတင်းတိုးထွက်နေကြသည်။ ဘရာ စီ ယာကို ချွတ်လိုက်လို့ ခွက်ထဲကနေ ထွက်လာသည့် တိုင် ရင်သားတွေက လျှောကျသွားခြင်းမရှိဘဲ တင်းတင်း ရင်းရင်း နေရာ တကျဖြစ်နေသည်။ အသက်လေးဆယ် ရှိသည့်တိုင် လျော့တွဲခြင်း မရှိသေးသည့်ရင်သား တွေကို လက်နှင့်
အသာမကြည့်မိသည့် အခါတွင်တကိုယ်လုံးကြက်သီးမွေးညင်းတွေ ထလာ သလိုခံစားရသည်။
ရင်သားတွေသာမဟုတ် ပုခုံးသား၊ လက်မောင်းသာတွေက လည်းတင်းရင်းစိုပြေနေဆဲပင်။ အဆီပိုမရှိပါ။ ဗိုက် ခေါက်ကလည်းရွယ်တူ မိန်းမတွေလို ထူထူမောက်မောက်မဟုတ်ဘဲ
ယောင်ယောင်လေးသာမို့ သယောင် ရှိနေ သည်ကို စိုက်ကြည့်ရင်း ထမိန်ကို ချွတ်ချလိုက်သည်။ ဆီးခုံမို့မို့အောက်တွင် အမွှေးတွေ နည်းနည်းပြန်ရှည် နေ ကြသည်။ သက်ပြင်းချ
ရင်း ဒီနေ့တော့ ရိတ်လို့ မဖြစ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ အပျိုဖြစ်လာစမှာ အမွှေးလေး တွေ ထွက်လာတော့ ရှက်စိတ်ဖြင့် ကပ်ကြေးနှင့် ညှပ်ပစ်ခဲ့၏။ အမွှေးကြမ်းကြမ်း တွေရှည်
ထွက်လာတော့ ဒေါ်နုနု ရှိန် မနေတတ်တော့ပါ။ မြင်ရထိရရင် စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုကြီးမှန်း မသိ။ တက္ကသိုလ်ရောက်မှ သူငယ်ချင်း တယောက် က သူမ၏ အမွှေးတွေကို မှန်မှန်
ရိတ်ပေးသည့် အကြောင်း ပြောပြရာမှ ဒေါ်နုနုရှိန် လည်း ရိတ်ဖြစ်သွားသည်။
အခုတော့ အကျင့်ဖြစ်သွားပြီး နည်းနည်း ပြန်ရှည်လာတာ နှင့် မနေတတ်တော့။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ပစ္စည်း ကိုယ် ပြန် မကြည့်ရဲအောင်ဖြစ်နေရသည့် အချိန်မှာတော့ မရိတ်ရဲ ပါ။
ခြေတုန်လက်တုန်နှင့် ရှကုန်ရင်ခက်မည်။ မျက် လုံးထဲမှာ စန္ဒာ့မွေ့ယာ အောက်က အ ချောင်းကြီးကို ပြန်မြင်ယောင်လာသည့် အခါ တကိုယ်လုံးတုန်သွား၍ အလန့်တကြား ဖြင့်
ရေချိုးခန်းသုံး တ ဘက်ကြီးဖြင့် တ ကိုယ်လုံးလုံအောင်ပတ်ထားလိုက်မိသည်။
အပျိုကြီး ဖြစ်မည့်ဇာတာပါသူပီပီ ဒေါ်နုနုရှိန် မှာ နောက်ထပ်ဇီဇာ ကြောင်တာ တခုရှိသေးသည်။ အတွင်းခံကို နည်းနည်းလေး ဟောင်းသွားတာနှင့် ဘယ်တော့မှ မ၀တ်တော့။ အိမ်က ကောင်မလေးတွေကိုဖြစ်ဖြစ်၊ ခြံအလုပ် သမားကိုလှရွှေ၏ မိန်းမ ကိုဖြစ်ဖြစ်ပေး ပစ်လိုက်သည်။ ၀တ်ရင်လည်း အဖိုးအတန်သော၊ လှပသော အတွင်းခံ မျိုးတွေပဲ ၀ယ်ဝတ်
တတ်သည်။ သူ၏ အကျတွေရသည့် သူတွေက လည်း ထိုအကျင့်ကို သဘောကျကြသည်။ အတွင်းခံ အသစ်လှလှလေး ၀ယ်လာဖြစ်ပြီဆိုရင် အိမ်ရောက်တာ နှင့် မှန်ရှေ့မှာ
၀တ်ကြည့်တတ်သည်။ အပေါ် ကအင်္ကျီထပ်ဝတ်လိုက်ရင် ပျောက်ကွယ်သွားမှာမှန်း သိရက်နှင့် လှတာကိုပဲမက်သည်။ ဘယ်လောက်ဈေးကြီး ကြီး ၀ယ်ဝတ်သည်။ သွားရင်း
လာရင်း ကြိုက်တာတွေ့ရင်လည်း အမြဲဝယ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဒေါ်နုနုရှိန်ဆီမှာ အတွင်းခံတွေ ပုံနေတတ်သည်။ အတွင်းခံလှလှလေးဝတ်ထားသည့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မှန်ထဲမှာ
ပြန်ကြည့်ရတာ ကို ဒေါ်နုနုရှိန်ပျော်သည်။
လူတိုင်း၊ ယောက်ျားတိုင်း တပ်မက်စွာကြည့်ကြသည့် ခန္ဓာကိုယ် မိမိ မှာရှိမှန်း ဒေါ်နုနုရှိန် သိသည်။ ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ် အ၀တ်မပါဘဲမြင်ဖူးသည့် အကြိမ်တွေတိုင်း စိတ်ထဲ
ဘယ်လိုမှ မနေခဲ့ ဘဲဒီနေ့မှ ထူးခြားစွာရှက်ရွံ့နေသည့် အဖြစ်ကိုဒေါ်နုနုရှိန် နားမလည်ပါ။ ခါတိုင်းလို ပင်ရေချိုးရင်း ကိုယ်ကို ပွတ်သပ်သန့်စင် ခြင်းကိုပင် မလုံမလဲ ဖြစ် နေရသည်။
ပေါင်ကြား ထဲကို ဆပ်ပြာတိုက်ချိန်မှာပင်ရွရွလေးသာပွတ်မိ၏။
စိတ်ထဲ ဂယောင်ချောက်ခြားဖြစ်နေသည်ကို သည်းမခံနိုင်တော့သဖြင့် ရေချိုးတာကို အမြန် လက်စသတ်ပြီး အ ပြင်ကိုထွက်လာမိသည်။ ရေသုတ်ပြီး အ၀တ်အစားလဲတော့လည်း
မှန်ကို မကြည့်မိအောင်သတိထားနေမိသည်။ အ၀တ်အစား အပြည့်အစုံဝတ်ပြီး ခေါင်းဖြီး တော့မှသာ မှန်ပြန်ကြည့်သည်။ အသက်လေးဆယ် ရောက်မှ ဘာ ကြောင့် မြီးကောင်ပေါက် မလေးတယောက်လို ဖြစ်နေရသည်ကို ဒေါ်နုနုရှိန် နားမလည်ပါ။ ဒါပေမယ့် နားလည် ဖို့လဲ မလိုဟုတွေးနေမိပါသည်။
ညနေအဆောင်သူတွေ ပြန်ရောက်လာကြချိန်တွင် အရင်ရက်တွေကလို ဟိုလျှောက်ဒီသွား နှင့် မျက်နှာပြလူစစ် မနေတော့ဘဲ ခြောက်နာရီ ထိုးခါနီးမှ လူစုံမစုံ ဒေါ်အေးစိန်ကိုကြည့်
ခိုင်းလိုက်သည်။ လူစုံသည် ဆိုတော့မှ နာရာ ရား ကို တံခါးပိတ်ခိုင်းလိုက်၏။ သူတို့လေး တွေ မရှိခိုက် အခန်းထဲဝင်ကြည့်မိသည့် အဖြစ်ကို ဒေါ်နုနုရှိန် မျက်နှာ ပူနေမိခြင်း ဖြစ်
သည်။ အဆောင်သူတွေ၏ အခန်းထဲကို ဒေါ်နုနုရှိန်ဝင်ဖူးပါသည်။ ဒါပေမယ့် ပိုင်ရှင်ရှိသည့် အချိန် မျိုးမှသာ အကြောင်းကိစ္စတခုခု ဖြစ်သွားစကားပြောခြင်း၊ နေမကောင်းဟု ဆိုရင်သွားကြည့်ချင်း လောက်သာ ဖြစ် သည်။ စိတ်မလုံသည့် အတွက် သူတို့ညစာစားနေကြချိန်တွင် ဒေါ်နုနုရီ ခြံပြင်ကိုထွက်လာခဲ့၏။
ငယ်စဉ်ကထဲက သိခဲ့သည့် ကုလားအဖိုးအို အတွက်ဒေါ်နုနုရှိန် သည် ကောင်မလေးသာဖြစ်၏။
ဒေါ်အေးစိန် အလုပ်ရှုပ်ရသည့် အချိန်ဖြစ်လို့ တယောက်ထဲပဲ အနီးတ၀ိုက်မှာ လမ်းပတ်လျှောက်နေမိပါသည်။ သိ သည့်သူတွေက လည်းနှုတ်ဆက်သွားကြ၏။ ညီအကို မသိတသိ
အချိန်မှာ ဘယ်သူဘယ်ဝါရယ်လို့ လည်း သတိ မထား မိပါ။ အလိုက်သင့် ပြန်နှုတ်ဆက် လိုက်ရုံသာ ဖြစ်သည်။ အိမ်နှင့် ဝေးလာတော့မှ ပြန်လှည့်လာခဲ့၏။
အိမ်နားမရောက်မှီ လမ်းချိုးထဲက ထွက်လာသည့် အမျိုးသမီးတယောက်က အနားကပ်လာသည်။ မီးရောင်မှာ ထင်ထင်ရှားရှား မြင်ရသည့် အသားညိုညို နှင့် ဒီအမျိုးသမီး ကိုတော့ ဒေါ်နုနုရှိန် ကောင်းစွာသိပါသည်။
“ကျွန်မ ကို ပြခိုင်းထားတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေ ရှိလို့ ဆရာမဆီလာပြမလားလို့”
“တလောက တင်ဝယ်သေးတယ်လေ၊ မယူနိုင်သေးပါဘူး မစိုးစိုးနွယ်ရယ်”
“၀ယ်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကြည့်ပါဦး ဆရာမရဲ့၊ ကြိုက်တာတွေ့ချင်လဲ တွေ့မှာပေါ့”
မစိုးစိုးနွယ်က လိုင်းစုံရသည့် ပွဲစားဖြစ်သည်။ အိမ်ခြံမြေနှင့် စိန်ရွှေရတနာမှသည် အိမ်ဖေါ်အထိ ပွဲစားလုပ်၏။ ဒေါ် နုနုရှိန် အိမ်က အိမ်ဖေါ်ကလေး တယောက်က မစိုးစိုးနွယ်ခေါ်ပေး
ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒေါ်နုနုရှိန် က ဒီလိုအရပ် ပွဲစား နှင့် အဖိုးတန်ပစ္စည်း ၀ယ်လေ့ မရှိပါ။ ပြီးတော့ မစိုးစိုးနွယ်၏ ရွှေထည်တွေကလည်း သိပ်ပြီးအရည်ကောင်း လှသည် မဟုတ်။
တလောကမှ အိမ်က အဖေါ်ကောင်မလေးတွေ အတွက် ဈေးခပ်ပေါပေါ ဆွဲကြိုးလေးတွေ သူမ ထံမှ ၀ယ်ပေးဖြစ်ခဲ့သည်။
“ဗိုက်နာလို့ ထုတ်တာတဲ့၊ ပစ္စည်းကောင်းတွေပါ၊ ကြည့်ကြည့်ပါဦး ဆရာမရယ်၊ မနက်ဖြန်လာခဲ့ မယ်နော်”
ခြံဝ လဲ ရောက်နေ ပြီဖြစ်လို့ ဒေါ်နုနုရှိန်က ခပ်လွယ်လွယ် ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်သည်။
“သွားမယ်နော် ဆရာမ၊ နောက်တောင်ကျနေပြီလား မသိဘူး”
ဒေါ်နုနုရှိန် ကို နှုတ်ဆက်ပြီး မစိုးစိုးနွယ် ခပ်သွက်သွက်လျှောက်သွားသည်။ အရင်ကဆိုရင် ဆင်မယဉ်သာလို့ ပြော ရမည့် ခြေလှမ်းမျိုးနှင့် ညက်ညက်ကလေးသွားတတ်သူက
ဒီနေ့တော့ အရင်လိုနေပုံရသည်။ နောက်က နေ ကျားလိုက်လာသလို သုတ်ခြေတင် နေ၏။ သူမ ဆီက ပျံ့လွင့်လာသည့် ရေမွှေး နံ့ ပြင်းပြင်းက ဒေါ်နုနုရှိန် ဆီလွင့် လာ၏။ သူ့ အထွာနှင့်သူ ငွေကြေးပြည့်စုံပါလျှက်နှင့် ဘာကြောင့် ရေမွှေး ကောင်း ကောင်း မသုံးသနည်းဟု ဒေါ်နု နု ရှိန်တွေးနေမိသည်။
“အဲဒီ ကောင်မလေး နော်၊ ညနေဆိုရင် ဟိုဖက်ကို သွားပြီ၊ အဲဒီမှာ သူ့ရည်းစား ရှိလိမ့်မယ်”
နာရရား က တံခါးဖွင့်ပေးရင်းပြောသည်။
“မဟုတ်တာ နာရရားရယ်၊ သူ့မှာ ယောက်ျားရှိတယ်လေ၊ အလုပ်ရှိလို့ ဖြစ်မှာပါ”
“သူ့ယောက်ျားနော် သေတော့မယ်၊ သူအခု အသစ်ရှာနေတာ”
“ကဲ ..ကဲ ၊ သူ့ဖာသာ ဘာရှာရှာ၊ နာရရားကို လာမရှာရင် ပြီးရောပေါ့”
မုဆိုးဖို ကြီး နာရရားကို သူ့နဖူးသူရိုတ် ကျန်ခဲ့အောင်ပြောထားခဲ့ ပြီး ဒေါ်နုနုရှိန် အိမ်ထဲဝင်လာခဲ့သည်။ ထမင်းစား ခန်း ဖက်ကို တချက်သွားချောင်း လိုက်ပြီး အိပ်ခန်းထဲပြန်ဝင်
လာလိုက်သည်။ အားလုံးပြီးသွား မှပဲ ညစာကို အေး အေးဆေး ဆေး တယောက်ထဲ သွားစားတော့မည်။
« Last post by Had3s on Today at 03:02:03 AM »
သူမ အလွန်ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားခဲ့ရသည့် အဆောင်သူတချို့၏ လိင်မှုကိစ္စ အပေါ်သဘောထား နှင့် လုပ်ဆောင်ကျင့် သုံးနေမှုကို အမှတ်မထင်သိခွင့်ရလိုက်ခြင်းက ဒေါ်နုနုရှိန်၏ စိတ်ကို အလွန်အနှောက်အယှက်ပေးသည် ကို အထူး ပြောရန်လိုမည် မထင်ပါ။ သူမ ခမျာ အရမ်း လည်းထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မိပါသည်။ ထိုအကြောင်းတွေ ကြား ရပြီးကထဲက ခေါင်းထဲမှာ ဒါကိုပဲ တွေးနေမိသည်။
“good morning ဆရာမ၊ မင်္ဂလာပါ”
တက်ကြွလန်းဆတ်သည့် အသွင်ဖြင့် ထမင်းစားခန်းထဲဝင်လာပြီး နှုတ်ဆက်သည့် စန္ဒာ့ ကို ဒေါ်နုနုရှိန် ပြန်နှုတ် မဆက်မိသေးပဲ ငေးကြောင်ကြည့်နေမိပါသည်။ အိပ်ရေးမ၀ လို့ ငူငူ
ငေါင်ငေါင်ဖြစ် နေသည့် သူမနှင့် ဆန့်ကျင် စွာပင် စန္ဒာက ကြည်လင်ဖျတ်လတ်နေ၏။
“အော် ...အေး ...မင်္ဂလာပါကွယ်”
မီးခိုးရောင်ရင့်ရင့် ကုတ်နှင့် စကပ်ရှည်ကို ဆင်စွယ်ရောင်ကိုယ်ကြပ်ဖြင့် တွဲဖက်ဝတ်ဆင် ထားသည့် စန္ဒာက ပြန် ပြုံးပြလိုက်ပြီး ထမင်းစားပွဲမှာဝင်ထိုင်သည်။ တော်ဝင်ပန်းက မနက် စာတော့ စီစဉ်မပေးပါ။ အဆောင်သူတွေက ဒေါ်အေးစိန်၏ ကောင်မလေးတွေကို မုန့်ဖိုးပဲ ဖိုးပေးပြီး စီစဉ် ခိုင်းတာမျိုးကိုတော့ ဒေါ်နုနုရှိန် မသိသလိုပင် နေပါ ၏။ အခုလည်း စန္ဒာက ကောင်မလေး တွေ ၀ယ်ပေးထားသည့် မုန့်ဟင်းခါးစားနေသည်။
ဟိုတလောကမှ ၂၈ နှစ်ပြည့်သည့်စန္ဒာက တဆောင်လုံးကို မုန့်ကျွေးတာပြန်မှတ်မိသည်။ လူက ပိန်ပိန်သွယ် သွယ်ဖြစ်သော်လည်း စန္ဒာ့ရင်သားတွေကတော့ ဖွံ့ဖြိုးသည်ကို အခု
မှဒေါ် နုနုရှိန် သတိထားမိပါသည်။ ဒါတွေက သူမ၏ ချစ်သူအတွက် ကစားကွင်းကောင်းတခု ဖြစ် ချင်ဖြစ်နေခဲ့ပေလိမ့်မည်။ အခုတော့ လိင်တံအတု ဖြင့် စိတ် ဖြေနေသည် ဆိုသည့် စန္ဒာ့ ကို နားမလည်နိုင်သလို ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရသနည်းဟု သိချင်စိတ်လည်းပြင်း ပြ မိသည်။
ဒေါ်နုနုရှိန် ဆယ့်လေးနှစ်သမီးမှာ အပျိုဖြစ်ခဲ့ပြီး အခုဆိုရင်အသက်လေးဆယ်ပြည့်ပြီးခဲ့ပြီ။ နှစ်ဆယ့်ခြောက်နှစ် ဆို သည့်ကာလတခုမှာ လိင်ကိစ္စကို ဘာကြောင့်ကိုယ်နှင့် မဆိုင်သ လို နေခဲ့ပါလိမ့်ဟုလည်းတွေးမိ၏။ အရွယ် ရောက် သည်စမှပြီး ယောက်ျားသားတွေ၏ လိုချင်တပ်မက်မှုတွေ ပိုင်ဆိုင်လိုမှုတွေ မရေမတွက်နိုင်အောင် ကြုံ ခဲ့ပြီး သည့်အတွက် မိမိ လှသည့် အကြောင်း ဒေါ်နုနုရှိန်သိပါသည်။ လက်တွဲဖေါ်ယောက်ျားသား တယောက် ရဖို့ ဘယ် လိုမှ မခက်ပါ။ ခုအရွယ် အထိတိုင်အောင် ကမ်းလာသည့် လက်တွေကို ရှောင်ဖယ် နေရသည် မဟုတ်ပါ လား။ ရတာမလို လိုတာမရဟု အပျိုကြီးတွေကို ပြောစမှတ်ရှိကြသော်လည်း ဒေါ်နုနုရှိန် အတွက် ကတော့ လိုချင်သူ များလွန်းခြင်းကြောင့် တယောက်ထဲ
ဖြစ်ရခြင်းလို့ ဆိုမယ်ဆိုရင်ဆိုနိုင် ပါသည်။ များပြားသည့် ကမ်းလှမ်းမှု တွေ ကြားမှာ ဘာကိုရွေးရမှန်း မသိနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ ရ သည်။ မျက်စိမှိတ်ရွေးချင်စိတ်ပေါက်လောက်အောင်လည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ မတပ်မက်မိခဲ့။ အချစ်ဆိုသည့် အရာက ဒေါ်နုနုရှိန် နှလုံးသားတံခါးကို ဖြတ်ကျော်ဝင်လာဖို့ အသာ ထား၊ တံခါးခေါက်သံလေးပင် မပေးခဲ့ပေ။
တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူဘ၀ အလှဆုံးနှင့် အတောက်ပဆုံးအချိန်မှာ မိဘစကားနားထောင် သည့် သမီးအလိမ္မာ ဘ၀မှာ ကျေနပ်နေခဲ့မိသလို အထင်ကြီးအားကျသည့် ဆရာမ ဘ၀ကို ရောက်နိုင်ရေးအတွက် စာကြိုးစားဖို့ကို သာစိတ်သန်ခဲ့၏။ လူရိုသေရှင်ရိုသေ ဆရာမဖြစ်ချင် သူက လူမှုရေးပိုင်းမှာသန့်ရှင်းဖို့ လိုသည်ဟု တွေးခဲ့မိ တာ ကြောင့်လည်းပါသည်။
တက္ကသိုလ်ဆရာမ ဖြစ်လာပြန်တော့ ကျောင်းသားတွေက ဆရာမ ငယ်ငယ်လှလှလေးကို အရိုအသေ မတန် စေရန် အိနြေ္ဒကြီး တခွဲသားနှင့် နေရသလို တက္ကသိုလ် အသိုင်းအ၀ိုင်း ထုံးစံ နိုင်ငံခြားပညာသင်သွားခွင့် ရဖို့ အရေး အတွက်စာတွေပိုကြိုးစားရပြန်သောကြောင့် မေတ္တာရေးမှာလစ်ဟင်းရပြန်သည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားက ရ သည့်ဘွဲ့၊ လက်ထောက်ကထိက ဆို သည့်ရာထူးနှင့် ပြည့်စုံလာပြန်တော့လည်း မမျှော်လင့်ဘဲ မိခင်ကြီး၏ ကျန်းမာရေးက ၀င် လာသည်။
တန်ဖိုးထားခဲ့သည့် ဆရာမအလုပ်ကိုစွန့်ပြီး ပြုစုခဲ့သည့်တိုင် မိခင်ကိုဆုံးရပြန်သောအခါ ဖခင် ကိုလည်း တဦး ထဲ ပစ်မထားနိုင်လို့ အဖေနားမှာပဲ နေရင်း နောက်တော့ အဆောင်ဖွင့်ဖြစ်သည့်အခါ အဖေတလှည့် အဆောင်တ လှည့် အချိန်ပေးရင်း အချိန်တွေကုန်ဆုံးခဲ့ရသည်။ ဖခင် မရှိတော့သည့် အခါမှာလည်း နာမည်ရနေသည့် အ ဆောင်ကို ကြိုးစားစောင့်ရှောက် နေရသဖြင့် ဒေါ်နုနုရှိန် မှာ ထွေလီကာလီ စိတ်များချိန်မရခဲ့ပါ။
အခုခေတ်ကာလမှာ သမီးရည်းစား စံနှုံးတွေ ပြောင်းလဲ ကုန်ပြီလားဟု ဒေါ်နုနုရှိန် ဇဝေ ဇ၀ါ ဖြစ်ရသည်။ ဆိတ် ကွယ် ရာမှာ သွားပြီး လိင်ဆက်ဆံကြခြင်းက ဟိုတုန်းက အတွဲတွေ ပန်း ခြံသွားကြသလို ရုပ်ရှင်သွား ကြည့်ကြ သလို သာမန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် ကိစ္စတခုလို့ သတ်မှတ် ထားလိုက်ကြပြီထင်ပါသည်။ မိန်းကလေး သိက္ခာ၊ အပျိုစင် ဂုဏ်ဒြဒ်၊ စသည့် သတ်မှတ် ချက်တွေလည်း ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့လေပြီ။
ကျောင်းဆရာမ မဟုတ်တော့သည့်တိုင် ဆရာမစိတ်၊ ဆရာမကျင့် ဒေါ်နုနုရှိန် ပျောက်မ သွားပါ။ အဆောင်သူတွေ ဆိုတာကလည်းသူမ၏ ကျောင်းသူတပည့်လေးတွေ၏ အရွယ်သာဖြစ်ရာ တပည့်လေးတွေလိုပဲ သဘောထားမိပါသည်။ ကိုယ့်ဥယျာဉ် တွင်းက ပန်းက လေးတွေလို သဘောထားပြီး စောင့်ရှောက်ချင်စိတ်၊ ပျိုးထောင်ချင်စိတ် အမြဲရှိခဲ့သည်။
သူမ၏ ပန်းကလေးတွေ လှပကြပါသည်။ လန်းဆန်းတင့်တယ်ကြပါသည်။ သို့သော်လည်း အတွေး အမြင်ပိုင်းမှာတော့ ဒေါ်နုနုရှိန် ဖြစ်စေချင်သည်နှင့် များစွာခြားနား ခဲ့ပြီမှာ အမှန်ဖြစ် တော့၏။
ဒါပေမယ့် သူမ၏ မိန်းကလေးတွေက အလုပ်ခွင်မှာ ကျောင်းစာမှာတော့ အောင်မြင်ကြပါ သည်။ ရည်းစား ထား သော်လည်း၊ ရည်းစားနှင့် အိပ်သော်လည်း စိတ်လေပြီး ဆုံးရှုံးတာမျိုး လည်း ရှိမနေကြပြန်။ အိပ်ရေးမ၀လို့ ရီဝေ နေသည့် ခေါင်းကို ခပ်သာသာခါရင်း ဘာကိုနား လည်ရမှန်း မသိသည့်အဖြစ်ကို တွေးနေမိ၏။
သက်မာ၊ ပပ နှင့် စန္ဒာတို့ကတော့ အိမ်ထောင်သည် မဟုတ်သော်လည်း အပျိုမစစ်ကြတော့တာ သိပြီးဖြစ်သည်။ ကျန်သည့်မိန်းကလေး တွေရောဘယ်လိုလဲဟု သိချင်လာမိသည်။ အားလုံးတော့ ဒီလိုမဟုတ်နိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့် အ ဆောင်က မိန်းကလေး တ၀က်လောက်တော့ သက်မာတို့ အတိုင်းဖြစ်လောက်သည်ဟု ထင်မိပါသည်။သိချင်စိတ် ကို မထိန်းနိုင်တော့သည့် အခါ အဆောင်မှာ မိန်းကလေး တယောက်မှ မရှိတော့သည့် နေ့ လည်ခင်းတခုမှာ အ ခန်းတွေထဲဝင်ရှာမိတော့သည်။
ဒေါ်နုနုရှိန်ဆီမှာ အခန်းတိုင်း၏ သော့တွေရှိနေသည်ကို ဘယ်သူမှမသိကြပါ။ ဒေါ်နုနုရှိန် ကလည်း လိုလိုမယ်မယ် သိမ်းထားသော်လည်း တခါမှထုတ်မသုံးခဲ့ ဖူးပါ။ ဒီတခါမှ ထုတ်သုံးမိခြင်းဖြစ်ပါ၏။
အဆောင် က အိမ်မ နှင့်တဆက်ထဲဖြစ်သည်။ အပေါ်ထပ်ကဖြစ်စေ အောက်ထပ်ကဖြစ်စေ အဆောင် ၀ရံတာ သို့ တန်း ၀င်နိုင်သည်။ အင်္ဂလိပ်စာလုံး L ပုံစံဖြစ်အောင် အိမ်၏ ခြေရင်းဖက် အခြမ်းကို ဖြိုပြီး နှစ်ထပ်တန်းလျား ရှည် ကြီး နှင့် တဆက်ထဲ လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ မီးဖိုနှင့် ထမင်းစားခန်း ကိုတော့ အိမ်မ ထဲမှာထည့်ထား၏။ အခန်း ခြောက်ခန်းပဲ ရှိသည့် အောက်ထပ်ကို အရင်ဝင်ကြည့်သည်။ အောက်ထပ်က မိန်းကလေး တချို့က ဒီ နှစ်မှ ရောက်လာသည့် လူသစ်ကလေးတွေ ဖြစ်သည်။ စိတ်ထဲမှာ မလုံမလဲ ဖြစ်ရသော် လည်း အားတင်းပြီး လေ့လာ မိ၏။ သာမန်မိန်းကလေး တွေ၏ အခန်းမျိုးသာ ဖြစ်ကြောင်း မှတ်ချက်ချမိသည်။ တံမျက်စည်း လှည်း ဖို့ တော့ ဒီကလေး မတွေပျင်းပုံရသည်။
အပေါ်ကိုတက်သည့် အခါကျတော့ အရင်ဆုံး နားနှင့် ဆတ်ဆတ်ကြားခဲ့ရသည့် သက်မာ၏ အခန်း နှင့် ပပ၏ အခန်းကို ရှာသည်။ ရှာသည်ဆိုတာ က လည်း လက်ရာခြေရာ မပျက်ရအောင်သတိထားပြီး ကြည့်ရတာဖြစ် သည်။ အိပ်ယာပေါ် စားပွဲပေါ် နှင့် သော့ခတ် မထားသည့် ဘီရိုများ အံဆွဲများကို ဖွင့်ကြည့်ခြင်း မျိုးလောက်ပဲ လုပ်နိုင်သည်။ သော့ခတ်ထားတာတွေ ဆိုရင် တော့ ဘာမှလုပ်လို့ မရပေ။ သက်မာနှင့် ပပ ဆီမှာ ဘာမှထူး ခြားတာ မတွေ့သဖြင့် ကျန်တဲ့ အခန်းတွေ လိုက် ကြည့်မိသည်။ ကျောင်းသူလေး တယောက်၏ အံဆွဲထဲတွင် ကွန်ဒွန် နှစ်ခုသုံးခု တွေ့သည်။ တခြား တယောက် ဆီမှာတော့ ပဋိသန္ဓေ တားဆေးကဒ် တွေ့၏။ ဒါဆိုရင် သူ တို့လည်း ပပ တို့ နှင့် လိုင်းတူလို့ သတ်မှတ် နိုင်သည်။ ကျန်အခန်းတွေ မှာတော့ အ၀တ်တွေပွရှုပ်နေတာ၊ သုံး ပြီးသား လစဉ်သုံးဂွမ်းထုပ် ကို တွေ့ရာစက္ကူ နှင့် ပတ်ပြီး အခန်းထောင့်မှာ ဒီတိုင်းပစ်ထားတာ၊
နေကြာစေ့၊ ဆီး ထုပ် အခွံတွေ များနေတာ ဒီလောက်ပဲ တွေ့ရသည်။
စန္ဒာ့ အခန်းကတော့ အပြင်ဖက် အကျဆုံး အပေါ်ထပ်ထောင့် စွန်းမှာဆိုတော့ ဒေါ်နုနုရှိန် နောက်ဆုံးမှဝင်ဖြစ်၏။ အခန်းတွေ အားလုံးထဲမှာ စန္ဒာ့ အခန်းက အလင်းရောင်အရဆုံး အကောင်းဆုံး အခန်းဖြစ်သလို အသန့်ရှင်းအ သပ်ရပ် ဆုံး ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရသည်။ စန္ဒာက အမြဲသန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ နေတတ်သလိုသူမ၏ အခန်းက လည်း အခန်းရှင် အတိုင်းပင်ဖြစ်နေသည်။ သက်တမ်းရှည် အဆောင်သူဖြစ်နေလို့ ဒေါ်နုနုရှိန် က အကောင်း ဆုံးအခန်း ကိုပေးခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ အောက်ထပ်မှာ အိမ်မနှင့် ကပ်လျက်ရှိသော ရေချိုးခန်း အိမ်သာတွေ နှင့် ဝေးသည်မှ အပ လေ၀င်လေထွက်ကောင်းပြီး အလင်းရောင်ရသည့် အခန်းကို သဘောကျလို့ စန္ဒာ မနေတော့ရင်ပြောင်းနေ ချင်ပါသည် ဟု ကြိုပြောထားသူတွေတောင်ရှိပါသည်။
အခန်းထဲမှာ လိုက်ကြည့်ရင်း ဒေါ်နုနုရှိန် နားထဲတွင်“ ပြီးတာနဲ့ အိပ်ယာအောက်ကို ထိုးထည့်လိုက်ရုံပဲ” ဆိုသည့် စန္ဒာစကားကို ကြားယောင်လိုက်မိပြီးနောက်တွင် မွေ့ယာကို အသာလေး မပြီး ကြည့်လိုက်မိသည်။ ခြေရင်းဖက် မှာ ဘာမှမတွေ့၍ အလယ်လောက်ကို မလိုက်တော့မှ အဖြူလိုလို မီးခိုးလိုလိုအရောင်ဖြင့် ရာဘာအချောင်းကြီး ဘွားကနဲထွက်လာသည်။ စက္ကူ တရွက်နှင့် ပတ်ထားသော်လည်း အားလုံးကို ငုံမိအောင်မအုပ်နိုင်။ ထိပ်ဖျားနှင့် အရင်းဖက် က အပြားဝိုင်းဝိုင်းတခုက အပြင်သို့ထိုးထွက်နေသည်။
ထုပ်ထားသည့် စက္ကူမှာ ရေအနည်းငယ်စိုစွတ်နေသည်ကိုလည်းတွေ့ရသည်။ လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားဆဲ မွေ့ယာ ကို ပြန်ချဖို့မေ့ပြီးဒေါ်နုနုရှိန် ကြောင်ကြည့်နေမိသည်။ ဘယ်လောက် ကြာအောင်စိုက်ကြည့်နေမိတာကို သတိ မ ထားမိပါ။ ယောက်ျားတယောက်၏ တန်ဆာက ဒီလောက်အရွယ် အစားရှိသလား။ ဒေါ်နုနုရှိန် လည်းမမြင် ဖူး သည့်အတွက် ထူးဆန်းနေသည်။ ပိန်ပိန်ပါးပါး စန္ဒာ့ ၏ ကိုယ်လေးထဲသို့ ဒါကြီးထိုးထည့်လို့ ရသည်ဆိုတာ ကို လည်းအံ့သြနေမိပါသည်။
ကြည့်နေရင်း အသက်ရှုမြန်လာပြီး မွေ့ယာကိုင်ထားသည့်လက်တွေ တုန်နေကြောင်း ဒေါ်နုနုရှိန် သတိပြုလိုက် မိ ပြီးသည့်နောက်တွင် အနားစပ်ကနေ ပင့်မထားမိသည့် မွေ့ယာ ကိုလွှတ်ချပစ်လိုက်သည်။ အိပ်ယာခင်း အ နား စလေးတွေကို ညီညီညာညာ ဖြစ်သွားအောင် ပြန်လုပ်ပေးရင်း လူက ကတုန်ကရီဖြစ်နေသည်။ လက်ဖ၀ါး တွေမှာ ချွေးပြန် နေပြီး နဖူးစပ်မှာလည်းချွေးတွေသီးနေ၏။ အသက်မဲ့သည့် ယောက်ျားအင်္ဂါအတုတခုကို မြင်ရ သည့်အ စား သက်ရှိအဆိပ်ပြင်းမြွေ တကောင်ကိုမြင်တွေ့ရသလို တုန်လှုပ်မောပန်း နေရသည်။ ဒါတောင်မှ သက်မာက အ စစ်နှင့် အလွန်တူသည်ဟု ချီးမွမ်းခဲ့သည့် အရာကို တပိုင်းတစသာမြင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
လက်ရာခြေရာ ပျက်မပျက် စေ့စေ့စပ်စပ် အကဲခတ်ပြီး ပြန်ထွက်လာခဲ့သည့် တိုင်အောင် ဒေါ်နုနုရှိန် ရင်တုန်မ ပျောက်သေးပါ။ အိမ်ဖေါ်ကောင်မလေး တယောက်ကို သံပုရာရည် ဖျော်ခိုင်းပြီး သောက်လိုက်ရသည်။ တနေ့ လုံး လည်း အခန်းအောင်းနေမိ၏။ ဒေါ်အေးစိန် ကို ဈေးဝယ်ဖို့ ကားမောင်းပို့မည်ပြောထားတာကိုတောင် မထွက် ချင် တော့လို့ အိမ်ဖေါ်တ ယောက်ထည့်ပေးပြီး တက္ကဆီ နှင့်သွားခိုင်းလိုက်ရသည်။
« Last post by Had3s on Today at 02:57:20 AM »
တခုသော ညနေခင်းတွင် ဒေါ်နုနုရှိန် ခြံဝန်း အတွင်းလမ်းလျှောက်နေပါသည်။ တနေကုန် အလုပ်ကိစ္စ ကျောင်း ကိစ္စ နှင့် အပြင်ကိုရောက်နေကြသည့် အဆောင်သူ တွေလည်း တဖွဲဖွဲ နှင့် ပြန်လာနေကြပြီ ဖြစ်သည်။ သွားရင်း လာရင်း နှင့် ခြံဝန်း အတွင်းတွင် ဖေါက်ထားသည့် လမ်းကလေးနဘေး ပုဏ္ဏားရိပ် ပင်တန်း၏ အခြေ တွင် အာလူး ကြော်လား၊ ငါးမုန့်ကြော်လား မသိသည့် အိတ်ခွံ တခုကိုတွေ့၍ ပန်းခြံအလုပ်သမား ကိုလှရွှေတို့ လင်မယားသိမ်း ဖို့ ကျန်ခဲ့တာ ဖြစ်မည်ဟု တွေးကာ ကိုယ်တိုင်သွားကောက်လိုက်သည်။
ပုဏ္ဏားရိပ်ပင်တန်း၏ ရှေ့လမ်းဘေးတွင် တရုပ်စကားပင် တပင်ရှိပြီး အပင်ခြေတွင် ခုံတန်းလျားလေး တခု ရိုတ် ပေး ထားသည်။ ဒေါ်နုနုရှိန် ရောက်သွားချိန်တွင်ခုံတန်းလျား၌ သက်မာဆိုသည့် မိန်းကလေးထိုင်နေသည်။ အသားညို သယောင်ရှိသော်လည်း ငါးရံ့ကိုယ်လုံးလေး နှင့် ချစ်စဖွယ်ရုပ်ရည်ရှိသော သက်မာ၏ ဖခင်သည် ပြည် နယ်တခုတွင် ကြီးကြီးမာစတာ တယောက်ဖြစ်သည်။ အမ်ပီဖိုး ကလေးကို နားကြပ်တပ်ကာသီချင်းနား ထောင် ရင်း ငြိမ့်နေသည့် သက်မာက သူမ၏ နောက် ဖက်တွင် ဒေါ်နုနုရှိန် ရောက်နေသည်ကို လုံးဝ မသိပါ။ ပုဏ္ဏားရိပ် ပင်တန်း အပြင် တရုပ်စကားပင်ကပါကြားမှာ ခြားနေသည်။
သက်မာကို တချက်ကြည့်လိုက်ပြီး အိတ်ခွံလေးကို ကုန်းအကောက်တွင် မြက်ခင်းစပ်၌ ပေါက်နေသည့် စွယ်တော် ပင်ပေါက်လေး တပင်ကို ဒေါ်နုနုရှိန် မြင်လိုက်ရ၏။ ခြံထဲမှာ စွယ်တော်ပင် မရှိပါ။ ဘယ်က ဘယ်လိုရောက်လာ မှန်း မသိသည့် အပင်လေး ကို ရှင်သန်အောင် စိုက်ချင်စိတ်ပေါက်သွားသည်။ တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်၏ ၀တ္တု တွေ နှစ်ချိုက်ခဲ့ သူပီပီ စွယ်တော်ပင် ကို ဒေါ်နုနု ရှိန် သဘောကျသည်။ဒီနေရာ မှာတော့မဖြစ် နေရာရွှေ့ရမည်။ ပလပ် စတစ် အိတ်ခွံကလည်း အဆင်သင့်ရှိနေရာ အပင်ကလေး ကို မြေကြီး နှင့် ရောကာတူးယူပြီး ထည့် လိုက်လို့ရ သည်။ ရေစက်နားမှာ ဂေါ်ပြားငယ်လေး တခုသွားယူလာပြီး တူးနေတာကိုတောင် သက်မာမသိပါ။ မြေ ကလည်း ပျော့လို့ တူးလို့ လွယ်ပါသည်။ အမြစ်ပါအောင် ၀ိုက်ကာတူးပြီး ပလပ်စတစ်အိတ်ထိပ်ဝကို ဖွင့်ကာထည့် နေစဉ် သက်မာ၏ နှုတ်ဆက်သံကို ကြားလိုက်ရသည်။
ဒေါ်နုနုရှိန် ကို တော့မဟုတ်ပါ။ အပြင်က ပြန်လာသည့် သူမ၏ ဘေးခန်းက ပပ ကို နှုတ်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ် သည်။ အသားဖြူဖြူ၊ လုံးကြီးပေါက်လှ နှင့် ရုပ်ရည်လည်းချောသည့် ပပက သက်မာနှင့် အခန်းချင်းကပ်လျှက် ဖြစ်သလို ကျောင်းမှာလည်း တတန်းထဲတက်နေသည့် ဂုဏ်ထူးတန်းကျောင်းသူတွေ ဖြစ်သည်။ နားမှာနားကြပ် တပ်ပြီး စကားပြောလိုက်ခြင်း ဖြစ်ရာသက်မာ အသံက တော်တော်ကျယ်၏။
“ကောင်မ၊ ကုံးကွ လာပါလား၊ နင့်ကို မျိုးကို ဘယ်လောက်တောင် ဆော်လွှတ်လိုက်လဲ”
နောက်မှာ ရှိသည့် ဒေါ်နုနု ရှိန်ကို နှစ်ယောက်လုံး မမြင်ကြပါ။ ပပ ခုံတန်းမှာဝင်ထိုင်လိုက်သံကြားရသည်။
“သက်မာရယ် နင့်အသံကြီးက ကျယ်လိုက်တာ၊ နားကြပ်ချွတ်ပြီး ပြောစမ်းပါ”
“အေးပါ၊ အေးပါ ချွတ်လိုက်ပါပြီ၊ နင့်ကြည့်ရတာ ခြေထောက်တောင် မနည်းသယ်နေရတယ်၊ ဘယ်နှစ်ခါတောင် လုပ်လိုက်လို့တုန်း”
“မှတ်တောင် မမမှတ်မိပါဘူး သူငယ်ချင်းရာ”
ပပ၏ အသံက နွမ်းဖျော့ နေသည်။
“မျက်လုံးတွေလဲ စင်းလို့ အခုထိ ဖီးတက်နေတုန်းလား၊ ဘယ်မှာတုန်း၊ ခါတိုင်းလို မျိုးကို သူငယ်ချင်းအခန်း ပဲ လား”
“မဟုတ်ဘူး၊ ဒီနေ့ သူတို့ဖဲဝိုင်းရှိလို့တဲ့၊ မရမ်းကုန်း ဖက်က Inn တခုကိုသွားတာ”
“ဘယ်လိုလဲ၊ အေးအေးဆေးဆေး ရှိရဲ့လား”
“ရှိပါတယ်၊ လူလဲရှင်းတယ်၊ နာမည်တော့ ငါလဲ မဖတ်မိဘူး”
ချစ်သူနှင့် ဆိတ်ကွယ်ရာတခုသို့ သွားသည့် အကြောင်းကို ထမင်းစားရေသောက်ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး ပြောနေသည့် သူ ငယ်မ နှစ်ယောက်၏ စကားကို နားထောင်ရင်း ဒေါ်နုနုရှိန် လက်တွေတုန်လာသည်။ ထိုင်ရာကနေ ထရပ်လိုက် ရင် မြင်သွားကြမှာစိုးပြီး မလှုပ်မယှက် ဆက်၍ထိုင်နေရသည်။ နဖူးမှာ ချွေးတွေစို့လာတာကို တောင် သုတ်မပစ် နိုင်ရှာပါ။
“ဘယ်သူမြှောက်ပေး လိုက်တယ်မသိပါဘူး သက်မာရယ်၊ အားဆေး အကောင်းစားတဲ့၊ အဲဒါသောက်ပြီးတော့ ငါ့ ကို ဒုက္ခ ပေးတော့တာပဲ၊ တခါပြီး ဖို့ တနာရီလောက်ကြာတယ်၊
လူလဲသေချင်စော်နံလာတာပဲ၊ အခုထိနာနေတုန်း ပဲ၊ ဗိုက်တောင်အောင့်တယ်”
“မှတ်ပြီလား၊ ရဲမင်းစိုးကို မဖြတ်ပါနဲ့ လို့ငါတားရဲ့သားနဲ့ နင်နားမှ မထောင်တာ၊ မျိုးကို ရုပ်ကိုက ထန်တဲ့ ရုပ်”
“ဆေးသောက်လိုက်လို့ပါဟယ်၊ အရင်ဒီလို မဟုတ်ပါဘူး၊ နောက်ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ ဆောရီးပဲ ပြောခဲ့တယ်၊ ရေချိုး လိုက်ဦးမယ် ဟာ၊ ဒီညတော့ TV တောင်ကြည့်နိုင်တော့မယ် မထင်ဘူး”
“ဟေ့ ဒီနှစ်ယောက် ဘာတွေ အတင်းတုတ်နေတာလဲ”
“ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး မမစန္ဒာ”
ပပ လေးတွဲ့သည့်ခြေလှမ်းတွေ နှင့် အဆောင်ဖက်ကို လျှောက်သွားသည်။ နောက်ရောက်လာသည့် စန္ဒာက တော်ဝင်ပန်း ၏ ၀ါရင့် အဆောင်သူဖြစ်သည်။ ကျောင်းသူဘ၀
ကထဲက နေခဲ့ပြီး အခုဆိုရင် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ ကြီးတခုမှာ ဒေါ်လာအများကြီးရသည့် မန်နေဂျာမလေး တယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ အနည်းငယ် ပိန်သယောင်ရှိ သော်လည်း သူ့အ
တိုင်းအတာနှင့် သူကြည့်ကောင်းသူလေး ဖြစ်သည်။ ဒေါ်နုနုရှိန် နှင့် အရင်းနှီးဆုံး အဆောင် သူ လည်းဖြစ်သည်။
“မိပ က ဘာဖြစ်တာလဲ၊ လေတိုက်ရင်လဲမယ့် ပုံနဲ့၊ သူ့ချစ်ချစ် ဆီက ပြန်လာတာလား”
“သေချာတာပေါ့ မမရယ်၊ မျိုးကို ဆိုတဲ့ ငနာလက်ချက်ပေါ့၊ အဲဒီကောင်သိပ်မွှန်တာ”
“အင်းပေါ့၊ ပပ လိုအလုံးအထည်နဲ့ တောင်ယိုင်ဆင်းလာတာပဲ၊ သဘောပေါက်ပါတယ်၊ သက်မာချစ်ချစ်ကရော ဘယ်လိုလဲ”
“ငြိမ်းချမ်း က အေးဆေးပါ၊ သက်မာ သဘောမတူပဲ ဘာမှမလုပ်ဘူး”
“ဒါပေမယ့် သက်မာက လည်းအမြဲသဘောတူတယ် မဟုတ်လား”
ရယ်သံလေးတွေ လွင့်လာသော်လည်း ဒေါ်နုနုရှိန် နားမှာမချိုပါ။ အဆောင်မှာ အသက်အကြီးဆုံး၊ ၀ါအရင့်ဆုံး ဖြစ်လျက်နှင့် ဒီကလေးမတွေ ကို မဆိုမဆုံးမသည့် အပြင် မိမိ ကို
လည်း ဒီလိုမျိုးတွေ ရှိနေတာကို အသိမပေး သည့် စန္ဒာ ကို စိတ်ထဲက ကျိတ်ပြီး အပြစ်တင်နေမိသည်။
“သက်မာ တို့က တခါတလေ မှပါ မမရယ်၊ ကျောင်းပိတ်ရက်ကြုံတာမျိုးမှ တညင်ကျောက်တန်း ဖက်ကို ကား မောင်းထွက်ကြတာလောက်ပါ၊ ဟီး …ဟီး”
“တခါ တလေ ဆိုပေမယ့် မပေါ့နဲ့နော်၊ ငြိသွားရင်ခက်မယ်”
“ငြိမ်းချမ်းက သက်မာထက်တောင်ကြောက်တတ်သေးတယ်၊ ဆိုင်ကယ်စီးရင် အမြဲတမ်း ဦးထုပ်ဆောင်းတယ်”
“တော်သေးတာပေါ့၊ သက်မာ အလုပ်မရှုပ်တော့ဘူး”
“အင်း …. ပပ ကတော့ဆေးထိုးတယ်၊ ညီမတော့ ဆေးခန်း မသွားရဲပေါင်၊ ရှက်စရာကြီး၊ တကယ်တော့ ရည်းစား ထားရတာလဲ ရှုပ်ပါတယ်၊ မမစန္ဒာလို အတုကြီးသုံးတာပဲ ကောင်းပါတယ်။”
“ဟောတော် … ရှင်က ဘယ်လိုသိတာတုန်း၊ ချောင်းစရာ အပေါက်လည်း မရှိပါဘူး ရှက်လိုက်တာ”
“ကိုယ့်ညီမလေးပဲ မရှက်ပါနဲ့၊ သက်မာ ကလည်း မမအခန်းထဲမှာ ကပ်ကြေးလာရှာရင်း မတော်တဆတွေ့တာပါ၊ ဘယ်သူ့မှ မပြောဘူး၊ စိတ်ထဲမှာပဲထားတယ်”
စန္ဒာလည်း ခေသူ မဟုတ်ပါလားဆိုသည့် အတွေးကြောင့် ဒေါ်နုနုရှိန်ပါးစပ် အဟောင်းသားဖြစ်နေမိသည်။
“ငါ့ ညီမလေး လိမ်မာတယ်၊ ညကျရင် လဘက်သုတ်ကျွေးရမယ်”
“ဒါနဲ့ မမ အဲဒါကို ဘယ်ကသွားဝယ်တာလဲဟင်”
“လက်ဆောင်ရတာ၊ မ တို့ဆီကို project နဲ့လာတဲ့ ဖော်ရိန်နာမ တယောက်လက်ဆောင်ပေးသွားတာ၊ သူက စန္ဒာ နင့်မှာရည်းစားရှိလားတဲ့၊ အရင်ကရှိတယ် အခုမရှိဘူး
ဆိုတော့ sex ကိစ္စ စိတ်ဖြစ်လာရင် ဘယ်လိုလုပ် သလဲ မေးတာနဲ့ အဆင်ပြေသလိုပေါ့ လို့ပြောလိုက်တာ ပြန်ခါနီး အဲဒါကြီး ပေးသွားတာပဲ”
“အသစ်ပါ၊ သူက နှစ်ခုတောင်ယူလာတာတဲ့”
“အကြီး ကြီးပဲနော်၊ မမ မနာဘူးလား”
“Gel သုံးရတာပေါ့၊ ကလေးတွေ သုံးတဲ့ Baby Oil ဆိုတာလေ အဲဒါနဲ့ ရတယ်၊ Water Gel ဆိုလဲရတယ်”
“အင်းပေါ့၊ သူကတော့ သူ့ဆီနဲ့ သူပေးသွားတာပဲ၊ ကုန်သွားတာနဲ့ သူ့ကို e-mail ပို့မေးတော့ နင်မ၀ယ်ချင်ရင် Water Gel သုံးတဲ့၊ အမယ်လေး သူပြန်ယူသွားတဲ့ ဟာကြီး ညီ
မတွေ့ရင် လန့်မယ်၊ အထစ်အထစ် အရစ်အရစ် တွေ နဲ့ ကြောက်စရာကြီး၊ သူကပြောတော့ အဲဒါမျိုးမှ ပိုထိတာတဲ့”
“သက်မာ လဲ ငြိမ်းချမ်းနဲ့ ပြတ်ရင် မမ လမ်းစဉ် လိုက်ရင်ကောင်း မလားမသိဘူး”
“အတုက အစစ်လောက်ဘယ်ကောင်း မလဲ ညီမရယ်၊ တို့ က ကြိုက်မယ့်လူမရှိလို့”
“မမ ပြောဖူးတဲ့ စလုံးက လူကြီးကရော”
“မမ က နှစ်မျိုးလုံးကြုံဖူးတော့ မေးကြည့်ရဦးမယ်၊ အတုနဲ့ အစစ် တော်တော်ကွာသလား”
“ကွာတာပေါ့၊ အတုကို အစစ်နဲ့ ဘယ်လောက်တူအောင်လုပ်ထားလုပ်ထား အစစ်ကို မမှီဘူး”
“အင်း … မမ ဆီက ဟာကတော့ တကယ့် အစစ်အတိုင်းပဲနော်၊ သွေးကြောတွေ တောင်ပါတယ်”
“ဒါပေမယ့် အထိအတွေ့ကျတော့ ကွာတယ် ညီမရဲ့၊ လူ ကျတော့ အပွေ့အဖက် အနမ်းလေးတွေပါတယ် လေ၊ အတုကျတော့ စိတ်မကောက်ဘူး၊ သ၀န်မတိုဘူး၊ သုံးပြီးတာနဲ့ အိပ်ယာအောက် ထိုးထည့်လိုက်ရုံပဲ၊ ကဲပါ မှောင် တောင် မှောင်တော့မယ် အထဲဝင်ရအောင်၊ သိချင် ညကျမှ ဆက်မေး ဟုတ်လား”
စန္ဒာ နှင့် သက်မာ အသံတွေဝေးသွားသည် အထိ ဒေါ်နုနုရှိန် ငူငူကြီး ဆက်ထိုင်နေမိသည်။ တော်တော်လေး မှောင်လာတော့ မှထမိ၏။ ထိုင်နေတုန်းက မသိသော်လည်း ထလိုက်တော့ ခြေထောက်တွေ ထုံကျဉ်နေသည်။ လက်စ နှင့် စွယ်တော်ပင်လေး ကို အဆောင်အ၀င်ဝ၏ ညာဖက်နားက လွတ်နေသည့်နေရာမှာ သွားပြန်စိုက် လိုက်ပြီး အနားရောက်လာသည့် အိမ်ဖေါ်ကောင်မလေး တယောက်ကို ရေလောင်းခိုင်းကာ အိမ်ထဲဝင်ခဲ့ သည်။
လမ်းမှာတွေ့သည့် အဆောင်သူမိန်းကလေး တယောက်က ဒေါ်နုနုရှိန် နောက်ဖက်ကို လက်ညိုးထိုးပြသည်။
“ဆရာမ ထမိန် နောက်မှာ ကွက်နေတယ်”
လက်နှင့်စမ်းကြည့်လိုက်ရာ စိုစိစိ ချောကျိကျိ နှင့်ဖြစ်နေ၍ အခန်းထဲ မြန်မြန်ပြေးဝင်ပြီး မီးရောင်နှင့် ဖြန့်ကြည့် လိုက်မိသည်။ လေးလက်မ ပတ်လည်လောက်ရှိမည့် အကွက်ကြီးတကွက်ကို မြင်ရသည်။ သွေးလည်း မဟုတ်ပါ။ ဘယ်ကလာသနည်း ဟု စဉ်းစားနေဆဲ မသိစိတ်၏ စေ့ဆော်မှု ကြောင့်ပေါင်ကြားကို လက်နှင့် စမ်းလိုက်ရင်း ဒေါ်နုနုရှိန် တကိုယ်လုံး အေးစက် တောင့်တင်းသွားရသည်။ သူမ၏ မိန်းမအင်္ဂါအ၀တွင် ရွှဲရွှဲစိုနေသည်ကို စမ်းလိုက်မိသည်နှင့် အံကို တင်းတင်းကြိတ်ပြီး အိပ်ခန်းနှင့် တွဲထားသည့် အိမ်သာထဲသို့ အပြေးဝင်လိုက်မိ ပါတော့သည်။
« Last post by Had3s on Today at 02:56:05 AM »
ဒီအကြောင်း ကိုပြောရမည်ဆိုရင် “တော်ဝင်ပန်း” အမျိုးသမီး ဘော်ဒါဆောင်က စရမည်မှာသေချာ၏။ တော်ဝင် ပန်း ဆိုသည်မှာ ရန်ကုန်မြို့ ဆင်ခြေဖုံး ဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက် တခု၏ အစွန်မှာ ရှိသည်။ တဖက်ရပ် ကွက် ကတော့ သာမန်လူတန်းစား အများစုနေထိုင်ရာ ရပ်ကွက်ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ တော်ဝင်ပန်း တည်ရှိရာက လည်း ဟို အရင်ကဆိုရင် သာမန်ရပ်ကွက်တခုသာဖြစ်သည်။ နောက်မှ လူလူသူသူ လူချမ်းသာ ရပ်ကွက်ဆန် ဆန် ဖြစ် လာ သည့် နေရာတခုဖြစ်သည်။
တော်ဝင်ပန်းကို နာမည်နှင့် လိုက်သည်ဟု အရပ်ထဲမှာရော ဒီအနီးနား တ၀ိုက်မှာပါ သိကြသည်။ ပြောစမှတ် ဖြစ် လောက်အောင်လည်း အဆောင်သူတွေက လှတပတ လေးတွေများသည်။ တော်ဝင်ပန်းမှ မိန်းကလေး တွေ အ ကြောင်းပြောပါက အဆောင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ ဒေါ်နုနုရှိန် ဆိုသည့် မိန်းမချောကြီး ၏ အကြောင်းက စပြောမှ ဖြစ်ပါ မည်။ အကယ်၍ အဆောင်သူ မိန်းကလေး တယောက်ကို သွားပြီး တော်ဝင်ပန်း က မိန်းကလေး တွေ လှသည့် အကြောင်းသင်က ပြောမည်ဆိုရင် အပြောခံရသူ မိန်းကလေးက “ဆရာမ ကမှ ပိုလှတာပါ” ဟုပြော မှာ မလွဲ အ သေ အချာဖြစ်သည်။ အဆောင်သူတွေ ဘယ်လောက်ချောချော ဒေါ်နုနုရှိန် ကို မမှီတာ မြင်ဖူးသူတိုင်း လက် ခံ ကြ ရသည့် အချက်ဖြစ်ပါသည်။
အသက် လေးဆယ်ကို လပိုင်းလောက်ကျော်နေသည့် ဒေါ်နုနုရှိန် ကို ဘယ်သူကမဆို သုံးဆယ် သီသီ စွန်းစ လောက် ဟုသာ ထင်ပေမည်။ နာမည်နှင့် လိုက်အောင် အရွယ်တင်နုပျိုသည်။ လှပသော မျက်နှာ နှင့် ဖြူစင် ၀င်း မွတ်သည့် အသားအရည် ရှိသည်သာမက ထွားသောရင်၊ ကျင်သောခါး၊ ကား သောတင် စသည့်မက်လောက် စ ရာ ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာတွေ ရှိသည့် ဒေါ်နုနုရှိန်သည် အခုချိန်ထိ အပျိုကြီး တယောက်ဖြစ်နေခြင်း က ထူးခြားအံ့ သြ ဖွယ်ရာ ကောင်းလွန်းလှသည်။ တချို့ ကတော့ ချောလွန်းလို့ အပျိုကြီး ဖြစ်တာဟု ဆိုကြ၏။
အဆောင်သူတွေက ဆရာမ ဟုခေါ်ကြသည့် ဒေါ်နုနုရှိန်သည် အရင်တုန်းကတော့ တကယ့်ဆရာမ တယောက် ဖြစ်ခဲ့ပါ၏။ နယ်က တက္ကသိုလ်တခုတွင် လက်ထောက်ကထိက တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် မိခင်ကြီး ၏ ကျန်း မာ ရေးအခြေအနေ ကြောင့် အလုပ်က နှုတ်ထွက်ခဲ့ရသည်။ အလုပ်ထွက်ကာ ပြန်လာပြီးနောက် အမေဖြစ်သူကို လ ပိုင်း လောက်သာ ပြုစုခွင့်ရခဲ့သည်။ မိခင်ကြီး ကွယ်လွန်သွားပြီးနောက် တယောက်ထဲ အထီးကျန် ဖြစ်ခဲ့ရ သည့် ဖခင်ကြီး ကိုပြုစုရင်း အချိန်တွေ ကုန်ခဲ့ရသည့် အတွက် အိမ်ထောင်ရေးကို ပြန်လှည့် မကြည့်နိုင်တာလည်း ဖြစ် ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သားအဖ နှစ်ယောက်ထဲ ကျန်ခဲ့သော်လည်း ဒေါ်နုနုရှိန် တို့တွင် စည်းစိမ်ဥစ္စာက ပြည့်စုံပြီးသား ဖြစ်သည်။ ဒေါ် နုနု ရှိန် တက္ကသိုလ် ဆရာမ လုပ်ခဲ့တာကလည်း ဂုဏ်အတွက် နှင့် ၀ါသနာကြောင့်သာဖြစ်သည်။ အလုပ်မရှိဘဲ ဒီအတိုင်း မနေချင်သည့် ဒေါ်နုနုရှိန် က မိခင်ကွယ်လွန်ပြီး တနှစ်လောက်အကြာတွင် ဘော်ဒါဆောင်ဖွင့်ဖြစ်သည်။ ဆရာမ ဘ၀တုန်းကလည်း အဆောင်နည်းပြ၊ အဆောင်မှုး တာဝန်တွေယူခဲ့ ရသူဖြစ်လို့ အိုးမကွာအိမ်မကွာ စီး ပွားရေးဖြစ်သည့် ဒီလုပ်ငန်းကို ရွေးချယ်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒေါ်နုနုရှိန်၏ ဖခင်ကလည်း အားပေးသည်။ အကယ် ၍ သူသာ မျက်နှာလွှဲခဲ့ပါလျှင် သမီးတယောက်ထဲ ကျန်ခဲ့မှာစိုးသည်။ ဘော်ဒါ ဆောင်ဆိုတော့ စည်စည်ကားကား သိုက်သိုက် ၀န်းဝန်း နှင့် ဒေါ်နုနု ရှိန်အတွက် လုံခြုံမည်ဟု ယူဆသည်။ ဒါကြောင့်လား မသိပါ လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ် ခန့် က အဖိုးကြီး အိပ်နေရင်းနှင့် ပင်ငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့် ဇနီးသည် နောက်သို့လိုက်ပါသွားသည်။
ဒေါ်နုနုရှိန်၏ အဆောင်က အခန်းတွေ ကျယ်ဝန်းသန့်ပြန့်၏။ ခြံဝန်းကလည်း ကျယ်သည်။ ရေနှင့် မီးကို အငြို အ ငြင် မရှိရသည်။ထို့ ကြောင့်ဈေးအနည်းငယ် များသော်လည်း လူကြိုက်များသည်။ အမြဲလို အခန်းတွေပြည့် နေ လေ့ ရှိ၏။ အဆောင်သူလက်ခံရာ မှာလည်း ဒေါ်နုနုရှိန်က သေသေချာချာ စစ်ဆေးပြီးမှ လက်ခံသည်။ မိဘမျိုး ရိုး နှင့် လက်ရှိတက်နေသည့် ကျောင်း သို့ မဟုတ် လက်ရှိလုပ်နေသည့် အလုပ်အကိုင် အနေအထားကိုပါ လေ့လာ ပြီးမှ လက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ် ဆရာမပီပီ ပညာအရည်အချင်းမြင့်သူကို ပိုဦးစားပေးလက်ခံသည်။ ထို့ အပြင် ရုပ်ရည်ကိုလည်း ကြည့်သည်ဟု တချို့ကပြောကြ၏။ ရုပ်ရည်နှင့် ပတ်သက်လို့ကတော့ ဒေါ်နုနုရှိန် တရား ၀င် မကြေငြာပါ။ ပညာရည် နှင့် အလုပ်အကိုင်ကို အလေးထားကြောင်းကိုတော့ ပြောလေ့ရှိသည်။ ဒါပေမယ့် တိုက်ဆိုင်လှစွာပင် ဒေါ်နုနုရှိန် ထံမှ မိန်းကလေးတွေက ခပ်ချောချောလေးတွေ များနေသည်။
အဆောင်သူတွေ ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်မစားချင်ပါကလည်း စီစဉ်ပေးသည်။ ဒီလိုလုပ်ပေး နိုင်အောင်လည်း ဒေါ် နုနုရှိန်ထံတွင် ၀န်ထမ်းအင်အား ကောင်းသည်။ မိဘတွေ ရှိစဉ်ကထဲက အတူနေခဲ့သူ ဒေါ်အေးစိန် ဦးစီးသည့် အိမ်ဖေါ် လေးယောက်ရှိသည်။ ကိုယ်တိုင် အ၀တ်မလျှော်ချင်သူတွေ အတွက်ဒေါ်အေးစိန် ထံတွင်ကျသင့်ငွေ ကို ပေးပြီး အပ်လိုက်ရုံပင်။ ထမင်းလခ ပေးထားသူ ဖြစ်ပါကလည်း ကျောင်းမသွားမှီ ရုံးမသွားမှီ ထမင်းချိုင့် က အ သင့် ဖြစ်ပြီးလေပြီ။ ညနေဆို ခြောက်နာရီ ဒေါင်ဆိုတာနှင့် ၀င်းတံခါးပိတ်လိုက်သည်။
ပိတ်ပြီးတာ နှင့် ဒေါ်နုနု ရှိန် ဖခင်ကြီး၏ လက်ရင်းတပည့်ကျော် ကုလားအဖိုးကြီး နာရရား က ၀င်းဝတွင် ၀ါးရင်းတုတ်ကြီး နှင့် နေရာယူလိုက် သည်။ သူက တညလုံး မအိပ်၊ ဂိတ်ဝ က သူ့ အတွက်တဲလေးထဲမှာ ထိုင်လိုက်၊ လက်နှိပ်ဓါတ်မီး တလက်ဖြင့် ခြံထဲမှာ ပတ်လိုက်လုပ်နေ၏။ မနက် ခြောက်နာရီ တံခါးပြန်ဖွင့် ပေးပြီးမှ မီးဖိုချောင်တွင် မနက်စာ သွားစားပြီး တဖက်ရပ်ကွက်တွင် ရှိသည့် သူ၏ အိမ်သို့ ပြန်အိပ်၏။
ညနေ ခြောက်နာရီ ကျော်လျှင် မည်သူမှ အပြင်မထွက်ရပါ။ ဒါက အဆောင်သူတွေ အတွက်စည်းကမ်းဖြစ်ပြီး ဒေါ်နုနုရှိန် နှင့် အလုပ်သမား တချို့ကတော့ အကြောင်းကိစ္စရှိရင်ထွက်နိုင်ပါသည်။ များသော အားဖြင့်တော့ ခြေခင်း လက်ခင်းသာသည့် ညနေပိုင်းတွေ ဆိုရင် ဒေါ်နုနုရှိန် လမ်းလျှောက်ထွက်တတ်သည်။ တခါတလေ ဒေါ် အေးစိန်ပါပြီး တခါတလေတော့ သူမ တယောက်ထဲပင်။ အပြင်မထွက်ရသော်လည်း အဆောင်သူတွေ အ ဆောင် ထဲမှာ တော့လွတ်လပ်စွာနေနိုင်ပါသည်။
ဒေါ်နုနုရှိန် ကိုယ်တိုင်က ကျောင်းဆရာမ ဘ၀တွင် နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ပညာသင်သွားဖူးသည်ဖြစ်ရာ သိပ်ပြီးရှေးရိုး မဆန်သည့် အမြင်ရှိသူလည်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မိန်းကလေး
တွေကို အုပ်ထိန်းသည့် နေရာတွင် ခေတ်နှင့် လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်အောင် ချိန်ညှိပြီး လုပ်တတ်သူ အဖြစ် အဆောင်သူလေးတွေ ကလည်းသဘောကျ သည်။ ဒေါ်နုနုရှိန် ၏
၀တ်စားဆင်ယင်မှုက လည်း ငယ်ရွယ်သူတွေ နှင့် မခြားခေတ်မှီသည်။ သို့သော်လည်း ပြောစရာ ရှိရင် ဆိုဆုံးမစရာ ရှိရင်တော့ နှုတ်လေးသူမဟုတ်ပါ။
ယနေ့ခေတ် မိန်းကလေးတွေလို စကပ်အတို၊ ဘောင်းဘီ အကြပ်တွေ မ၀တ်သော်လည်း ဒေါ်နုနုရှိန် က စကပ် အရှည် နှင့် ဂါဝန်လောက်တော့ ၀တ်ပါသည်။ ရည်းစားသနာ ကိစ္စကိုလည်း အဆောင်မှာ လာတွေ့ စကားပြော ရုံ လောက်ကိုတော့ မသိသလိုသာနေ၏။ ဧည့်ခန်းထဲမှာ မပြောချင်ရင်လည်း ခြံထဲမှာ ပန်းခြံလိုလုပ်ထားသလို အရိပ် ကောင်း သစ်ပင်ကြီးတွေ အောက်မှာ ခုံတန်းတွေထားပေး၏။ အေးအေးဆေးဆေး ပြောနိုင်သည်။ ဆွေမျိုးသား ချင်း သို့ မဟုတ်လူကြီးသူမ တယောက်ယောက်၏ ထောက်ခံမှုမရှိဘဲ အပြင်ကို ညအိပ်ထွက်ခွင့်မပေးပါ။ နည်း နည်း ဟော့ရမ်းသည့် မိန်းကလေး နှစ်ဦး သုံးဦးလောက်ကို ဒေါ်နုနုရှိန်က မိဘ ခေါ်ပြီးပြန်အပ်ဖူးသည်။
ထိုသို့ ၀န်ဆောင်မှု ကောင်းခြင်း၊ စည်းကမ်း ကောင်းခြင်းတို့ ကြောင့် မိန်းကလေးတွေ၏ မိဘအုပ်ထိန်းသူတွေ က လည်း သဘောကျသည်။ တချို့ ပြည့်စုံသူတွေ ဆိုလျှင် ရန်ကုန်မှာ ကိုယ်ပိုင်တိုက်ခန်း၊ ဖြစ်ဖြစ် အိမ်ဖြစ်ဖြစ် ၀ယ် ပြီး ထားနိုင်သော် လည်း ဒေါ်နုနုရှိန် ထံမှာ သမီးကို တမင်လာထားတာမျိုးတောင်ရှိသည်။ ငွေကြေးချမ်းသာ သည့် မိန်းကလေး တွေ ရှိသလို၊ ရာထူးကြီးကြီး တွေ၏ ရင်သွေးတချို့ လည်းဒေါ်နုနုရှိန်ဆီ မှာရှိသည်။ တော် ရုံ သင့်ရုံ အဆင့်အတန်းမှ လာသူတော်တော်ရှား၏။
ထို့ကြောင့် နဂိုထဲက အမြတ်အစွန်း ကို အဓိက ထားသူမဟုတ်သည့် ဒေါ်နုနုရှိန်က ရေဖိုး၊မီးဖိုး နှင့် ၀န်ထမ်းစား ရိတ် ကျေလျှင်တော်ပြီ ဟုသဘောထားကာ အဆင်ပြေအောင်ပြည့်ပြည့် စုံစုံ စီမံပေးထား၏။ မီးတွေ ပျက်တတ် သည့် နွေရာသီ ဆိုရင် တောင် စာကြည့်ချိန်အတွက် မီးစက်မောင်းပေးသည်။ အခုဆိုရင် အင်တာနက်လိုင်း တောင် ယူဖို့ ဒေါ်နုနု ရှိန်စဉ်း စားနေသည်။ ဒီမှာ နေသူတွေ အားလုံးကလည်း တတ်နိုင်သူတွေ ဖြစ်ရာ အင်တာ နက်ရသည် နှင့် သူတို့လည်း ကိုယ်ပိုင် ကွန်ပျူတာတွေ ၀ယ်ကြမည်ဟု ဆိုကြသည်။
ဤမျှလောက်ဆိုလျှင် ဒေါ်နုနုရှိန် နှင့် တော်ဝင်ပန်း အဆောင်အကြောင်းနှင့် အဆောင်သူတို့ အခြေအနေ ကို အ ကျဉ်းမျှ ငုံမိပြီထင်ပါသည်။ ထပ်ပြောရန် ရှိသည်ကား ဒေါ်နုနုရှိန်သည် သူမ၏ အဆောင်၏ အဆင့်အတန်း မြင့် ခြင်းနှင့် အတူ အဆောင်သူတို့၏ အခြေမြင့်ခြင်း အပေါ်လည်း အလွန်ဂုဏ်ယူတတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူမ ကိုယ်သူ မလည်း ခေတ်နှင့် တသားထဲရှိသူဟု ယူဆထားခဲ့သည့် ဒေါ်နုနုရှိန် တယောက် မျက်လုံးပြူးစရာ အကြောင်းအရာ တွေ တခုမက ကြုံရသည့် နေ့ကိုတော့ မပျက်မကွက် ဖေါ်ပြရန်လိုပေမည်။
Myanmar Books (18+) / ဒုတိယနတ်သမီး (၁၈+)
« Last post by Had3s on Today at 02:54:45 AM »
စာရေးဆရာ - Jin_kaleat | Credit - မြန်မာ့အချစ်ရွာ
Myanmar Books (18+) / Do you want to read Incest?
« Last post by Had3s on October 07, 2011, 04:46:47 PM »
ကျေးဇူးပြု၍ ဆန္ဒမဲလေး ပေးကြပါ ခင်ဗျာ ...
Do you want to read Incest?
မောင်နှမ၊ သားနဲ့ အမိ၊ သမီးနဲ့ အဖေ ... ဆွေမျိုးချင်း ... ချစ်ကြတဲ့ဇာတ်လမ်းမျိုး ဖတ်ချင်ပါသလား ... ?
Myanmar Books (18+) / Re: (၇) အချစ်ကမ္ဘာထဲ ... ခရီးအတူထွက်ခဲ့တယ် ... (၁၈+)
« Last post by Had3s on October 07, 2011, 04:03:22 PM »
မမ အဖုတ်လေးထဲမှာ ... အရည်တွေစိုရွှဲနေတော့ ... နဲနဲ ၀င်ရထွက်ရ ချောင်သွားတယ် ... ချောင်တယ်ဆိုပေမယ့် ... မမ အဖုတ်လေးက ... ဆွဲဆွဲညှစ်ပြီး ... ဖင်လေးကို နောက်ပစ် ပစ်ပေးတာ ... အရမ်းခံရခက်တယ် ... ကောင်းလဲ အရမ်းကောင်းတယ် ... ကျွန်တော် မျက်စိမှိတ်ပြီး ... အလိုက်သင့်လေး ... မမ နောက်ကို ဆောင့်ပေးနေတာကို ... ခံစားကြည့်တယ် ... ကောင်းလိုက်တာ ... မမရယ် ... မမ အဖုတ်က အရမ်းသန်လွန်းတယ် ... ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို ... ညှစ်ထားရင်း ... ဆွဲဆွဲပွတ်ပြီး ... ၀င်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေတာ ... ကျွန်တော် ... မမ အဖုတ်ထဲ အကုန်ဝင်ခါနီး ... ပစ်ဆောင့်ပစ်လိုက်တယ် ... မမ တအားကော့ကော့ပေးတယ် ... ပိုပိုပြီး ကြမ်းလာတယ် ... မြန်လာတယ် ... ရေပန်းကကျတဲ့ ရေက မအေးတော့ပါ ... ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ ပူနေတယ် ... ရမက်တွေ ထန်နေတယ် ... မမ ခါးလေးတွန့်တွန့်သွားတာကို ကြည့်လိုက် ... မမ ဖင်နှစ်လုံးကြားထဲ ... ကျွန်တော့်ဟာ ၀င်သွားတာကြည့်လိုက်နဲ့ ... ကျွန်တော်လဲ ... ဖီးလ်တွေ တအားတက်လာတယ် ... မမ ဆတ်ကနဲ ကော့ပေးရင် ... ကျွန်တော် ဒုန်းကနဲ ... ဆောင့်ပစ်တယ် ... အ၀င်အထွက် ... အနှုတ်အသိမ်း ... လက်ညီတော့လေ ... ဘယ်လိုပြောရမှန်းကို မသိပါဘူး ... အရမ်းလဲ မောလာတယ် ... အရမ်းလဲ ... ကောင်းတယ် ... ခံစားရတာ ... ပြောပြမတတ်အောင် ... သွေးကြွမိတယ် ... ကျွန်တော့်ဟာလဲ ... တအားကို ... မာနေပြီ ... နာလဲနာနေပြီ ... ပူထူနေအောင် ... မမ လုပ်ပေးနေတော့ ... ခံစားချက်က ... သိပ်မကြာပါဘူး ... မမ အဖုတ်လေးက ... ပွစိပွစိနဲ့ ... အတင်းညှစ်တယ် ... ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ ... ညှစ်ပြီး ...
"သွေး ... သွေး ... ဟီး ... ရှီး ... ဟင့် ... ဟင့် ..."
"ကောင်းလား ... မမ ကောင်းရဲ့လား ..."
"သွေး ... သွေး ... အရမ်းကောင်းတယ်ကွာ ... ဟင့် ... ဟင့် ... ရှီး ... အားးး တော်ပြီ ... တော်ပြီ ... ရှီးးးးးးးးး"
ပွက်ကနဲ ပွက်ကနဲ ... မမ အဖုတ်ထဲက ... အရည်တွေ ... ပြည့်သွားတယ် ... ကျွန်တော်လဲ ... ဒုတ်ကို ... အဆုံးထိ ... ထိုးထည့်ပြီး ... အရည်တွေ ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တယ် ... ကောင်းလိုက်တာ မမရယ် ... ခြေဖျားတွေ ... ကုတ်ကွေးသွားအောင် ... ကောင်းလိုက်တာ မမရယ် ... ကျွန်တော့် တကိုယ်လုံး ... တဇတ်ဇတ်တုန်ပြီး ... ရှိသမျှအားအင်တွေ ... သွန်ပစ်လိုက်သလိုပါပဲ ... မမရယ် ... အရမ်းကောင်းတယ် ... မမ အဖုတ်ထဲမှာ ... ကျွန်တော် စိမ်ထားရင်း ... မမ ညှစ်ပေးတာလေးကို ခံစားမိတယ် ... နွေးထွေးတဲ့ မမ အဖုတ်လေးက ... နူးနူညံ့ညံ့လေးနဲ့ ညှစ်ညှစ်ပေးတာ ... ကောင်းလိုက်တာ မမရယ် ...
ကျွန်တော်နဲ့ မမ မြတ်နိုးဝေ ... ရေချိုးခန်းထဲမှာ ... ရမက်ခိုးဝေပြီးနောက် ... ရေအတူတူချိုးကြတယ် ... နုထွားတဲ့ ... မမနို့ကြီးတွေကို ... ဆပ်ပြာနဲ့ သေချာပွတ်ပေးတယ် ... ပြီးတော့ ... ပေါင်တံလေးတွေ ... တင်သားဆိုင်ကြီးတွေ ... ကျွန်တော် ... ဆပ်ပြာတိုက်ပေးတယ် ... မမ အသားက နူးညံ့တယ် ... ဒါပေမယ့် ... တင်းအိတယ် ... မပျော့ဘူး ... ကျစ်တယ် ... ပေါင်အတွင်းသားလေးတွေက ... အရမ်းကိုင်လို့ကောင်းတာပဲ ... ကျွန်တော် ... မမကို ဆပ်ပြာတိုက်ပေးနေတော့ ... ကျွန်တော့်ဟာက ... ထောင်လာတယ် ... မမ အဖုတ်ကြီးကို ဆပ်ပြာတိုက်ပေးချင်ပေမယ့် ... မမ ပေးမကိုင်ဘူး ... စပ်နေတယ်တဲ့ ... သနားပါတယ် ... ကျွန်တော် မော့ကြည့်လိုက်တော့ ... မမ မျက်ရည်ဝဲနေတယ် ... တော်တော်စပ်နေလား မသိပါဘူး ... မမ ... ကျွန်တော့်ကို ဆပ်ပြာပြန်တိုက်ပေးတယ် ... ကျောကုန်းကို ... သူ့လက်သည်းလေးနဲ့ ... ဖွဖွ
လေး ခြစ်ပေးတယ် ... ကျွန်တော့် လက်မောင်းတွေ ... ဗိုက်တွေ ... မမ ... ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို ကြည့်ပြီး ... ကျွန်တော့်ကို မျက်စောင်းထိုးတယ် ...
"သွေးဟာကြီးကလဲ ... ထောင်နေတာပဲ ..."
"မမက သိပ်လှတာကိုး ..."
"ဘာမှလဲ မဆိုင်ဘူး ..."
"ဆိုင်တာပေါ့ ... ဆိုင်လားမဆိုင်လား ... မသိသေးဘူးလား ..."
"ဟိုးဆရာ ... သိပါတယ်ရှင် ... သိပါတယ် ... ကြောက်ပါတယ်တော့ ..."
"မမ ... ဒါကို ဆပ်ပြာတိုက်ပေးအုံး ..."
"ဟင်း ... သွေးနော် ... မမကို အရမ်းနိုင်စားတယ် ..."
"ချစ်လို့ပါ ... မမကလဲ ..."
မမ မျက်စောင်းလေး ... ဒိုင်းကနဲ ထိုးပြီး ... ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို ... လက်ကလေးနဲ့ ဆုပ်ပြီး ... ဆပ်ပြာနဲ့ တိုက်ပေးတယ် ... ထောင်နေတဲ့ ... ကျွန်တော့်ဟာက ... တဇတ်ဇတ်တုန်လာတယ် ... အကြောကြီးတွေ ထောင်ထလာတယ် ...
"မမ ကြိုက်လား ..."
"မကြိုက်ပါဘူး ... အရမ်းနာတယ် ..."
မမ ... ကျွန်တော့်ဟာကို ကိုင်ပြီး ... မလွှတ်နိုင်တော့ဘူး ... သံလိုက်နဲ့ ကပ်ထားသလိုပဲ ... မမ ခွာမရတောဘူး ... မမ ... ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို ... ဖွဖွလေး ဆုပ်ပြီး ... ထုပေးတယ် ... အပေါ်အောက် ... ဖြေးဖြေးလုပ်တော့ ... ကျွန်တော့်ရင်ခုန်သံတွေ ... ပြန်နိုးထလာတယ် ... မမ နို့ကြီးကို ... ကျွန်တော် ... ဖွဖွလေး ... အုပ်ပြီးနယ်ပေးလိုက်တယ် ... ဟုန်းကနဲ ... အချစ်စိတ်တွေ ပြန်လည်နိုးထလာတယ် ... မမ လက်လေး ... သွက်လာတယ် ... အပေါ်အောက် အစုန်အဆန် ... ထုပေးချက်လေးက ... မြန်လာတယ် ... ကျွန်တော့်ရင်တွေ တအားခုန်လာပြီ ... မမက အလိုက်သိပါတယ် ... ခပ်သွက်သွက်လေး ... အမြန်ဆုံးလုပ်ပေးရှာတယ် ... တင်းကနဲ စီးကနဲ ဖြစ်ပြီး ... ကျွန်တော့်ဒုတ် အရမ်းမာလာတယ် ... ပွက်ကနဲ ... အရည်တွေ ကန်ထွက်သွားတယ် ... ကောင်းလိုက်တာ မမရယ် ... မမ ကျွန်တော့်ဟာထဲက ... အရည်တွေ ထွက်လာတာကို ... စိုက်ကြည့်နေတယ် ... သူလဲ ရမက်လှိုင်တွေ ထန်နေပြီ ထင်ပါရဲ့ ... ကျွန်တော် ... မမ အဖုတ်ကြီးကို ပွတ်ပေးမလို့ လုပ်တော့ ...
"ဟိုးဆရာ ... ဟိုး ... ကြာရင် အအေးပတ်ပြီး သေတော့မယ် ..."
ကျွန်တော့်လက်ကို အတင်းဖယ်ပြီး ... ရေချိုးခန်းထဲက ... ထွက်သွားတယ် ... မမ ဖင်ကြီးက ... သိမ့်ကနဲ သိမ့်ကနဲ ယမ်းခါသွားတာကို ... ကျွန်တော် လိုက်ငေးကြည့်နေမိတယ် ... ဟူး ... မလွယ်ဘူး ... မမနဲ့ အတူတူသာနေဖြစ်ရင် ... တနေ့လုံးချစ်နေလို့ ... အားပြတ်ပြီးသေမှာပဲ ... ကျွန်တော် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး ... ရေချိုးခန်းထဲက ထွက်လာခဲ့တယ် ... မမ အခန်းထဲမှာ ... မျက်နှာသုတ်ပ၀ါလေးနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ... စောင့်နေတယ် ... မမ အ၀တ်တွေတောင် ၀တ်ပြီးသွားပြီ ... တီရှပ်ပန်းရောင်လေးနဲ့ ... ထမီအမဲရောင်လေး ... ၀တ်ထားပြီးပြီ ... မမမျက်နှာလေးက ... နီနေသေးတယ် ... အရောင်ကျသွားပေမယ့် ... နဲနဲတော့ နီနေသေးတယ် ... အားရအောင် ချစ်ပြီးခါစ ... မမ မျက်နှာလေးက ... တမျိုးလေးပဲ ... အရမ်းလှတယ် ... ကျွန်တော် တချက် ရွှတ်ကနဲ နမ်းပစ်လိုက်တယ် ...
"အင် ... တော်ပြီနော် ..."
"ချစ်လို့ နမ်းတာ ..."
မမ ... ကျွန်တော့်အနမ်းကို ခံယူရင်း ... ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်က ... ရေတွေကို ... သုတ်ပေးတယ် ... ခေါင်းကိုငုံ့ခိုင်းပြီး ... ဆံပင်ကရေခြောက်အောင် ... ဖွဖွလေး သုတ်ပေးရှာတယ် ... မမ ... ဒီလို ... မျက်နှာသုတ်ပ၀ါနဲ့ ရေသုတ်ပေးတော့ ... ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်မှာ ... ရေတွေ ခြောက်သွားပေမယ့် ... ကျွန်တော့်နှလုံးသားထဲမှာ ... မမရဲ့ နွေးထွေးကြင်နာမှုလေး ... မခြောက်တော့ဘူး ... တစိမ့်စိမ့်နဲ့ ... ကျွန်တော့် နှလုံးသားထဲမှာ ... ယိုစီးကျလာတယ် ...
"အရမ်းချစ်တယ် ... မမရယ် ... "
"တော်ပါ ... လူကိုညာပြီး ..."
"ချစ်ပါတယ်လို့ ဆိုနေမှ ..."
"အင်းပါ ... ချစ်တယ် ... ချစ်တယ် ... ပြန်တော့ ..."
"မမက နှင်တာလား ..."
"မဟုတ်ဘူးလေ ... အေးနုကို ကြိုရအုံးမယ်ဆို ..."
ကျွန်တော် ... အ၀တ်တွေ သေချာဝတ်ပြီးတော့ ... မမ ခါးလေးကို ... ဆတ်ကနဲ ဖက်လိုက်တယ် ... မမ ပါးလေးကို နမ်းလိုက်တယ် ... မမ ... ငြိမ်ငြိမ်လေး ... ကျွန်တော့် အနမ်းကို ခံတယ် ... ပြီးတော့ ... မမ ပြန်နမ်းတယ် ... ရွှတ် ...
"မမ ... အရမ်းချစ်တယ်နော် ... ပြန်တောင် မပြန်ချင်ဘူး ..."
"အပိုတွေ ... သွေးနော် ... မမ တသက်လုံးခေါ်ထားအောင် ... မချွဲနဲ့ ..."
"ချစ်တယ် ... သွေးကို ... အရမ်းချစ်တယ် ..."
"အင်း ... ပြန်တော့ ... နောက်နေ့မှ တွေ့မယ်နော် ... သွေး ..."
နောက်နေ့မှ တွေ့မယ်နော် ... သွေး ... ဆိုတဲ့ ... အသံလေးမှာ ... မျှော်လင့်ချက်တွေ ... အများကြီးပါနေမှန်း ... ကျွန်တော် သိပါတယ် ... မမရယ် ... ကျွန်တော့်ကို အပေါက်ဝထိ လိုက်ပို့ပေးတယ် ... ပြန်ခါနီး မမ မျက်နှာမကောင်းဘူး ... ငိုမဲ့မဲ့လေး ဖြစ်နေတယ် ... ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းပါဘူး ... မမမြတ်နိုးဝေကို ... အရမ်းချစ်မိသွားတယ် ... တံခါးလေးကို ... တိုးတိုးလေး ပိတ်သွားတယ် ... ကျွန်တော် မဆင်းချင် ဆင်းချင်နဲ့ ... အောက်ထပ်ကို ဆင်းလာခဲ့တယ် ... ကျွန်တော် အောက်ထပ်ရောက်တော့ ... ၀ရန်တာမှာ ... မမ ... ကျွန်တော့်ကို ... ငေးကြည့်နေတယ် ... ကျွန်တော် လက်ဖ၀ါးကို ဖြန့်ပြီး တချက်နမ်းလိုက်တယ် ... ပြီးတော့ မှုတ်လိုက်တယ် ... ကျွန်တော့်အချစ်တွေ ... မမ မြတ်နိုးဝေဆီ ... ရောက်သွားပါစေ ... မမ ကျွန်တော့်ကို သေချာစိုက်ကြည့်တယ် ... ပြီးတော့ ... လက်လေး ယမ်းပြတယ် .. သွားတော့တဲ့ ... ကျွန်တော် ကားစက်နှိုးပြီး ... မမကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ... မမ မရှိတော့ဘူး ... ကျွန်တော် ... မမအေးနုဆီကို ... မောင်းလာခဲ့ပေမယ့် ... ကျွန်တော့်စိတ်တွေ ... မမမြတ်နိုးဝေဆီမှာ ကျန်ခဲ့သလား ... ကျွန်တော် မတွေးတတ်တော့ဘူး ... သေချာတာတော့ ... မျက်ရည်ဝဲနေတဲ့ ... မမ မြတ်နိုးဝေ မျက်နှာလေးကို ... ဖျောက်မရတာ အမှန်ပဲ ... ဒီလိုနဲ့ ... ကျွန်တော် ... ဆေးရုံကြီးရှေ့ကို ... ပြန်ရောက်လာတယ် ...
Myanmar Books (18+) / Re: (၈) ကိလေသာစုံတောမြိုင်ထဲက ... (၁၈+)
« Last post by Had3s on October 07, 2011, 08:31:37 AM »
ဖြေးဖြေးဆိုပေမယ့် ... "ဗကျော်ဗ" ... ခပ်ပြင်းပြင်း စုပ်ပစ်လိုက်တယ် ... စုပ်တသပ်သပ်နဲ့ ... စိမ့်ဒါလီ ... "ဗကျော်ဗ" ခေါင်းကို ... ဖွတယ် ... ပြီးတော့ ... အတင်းပဲ ... နို့ကြီးကို ကော့ပေးတယ် ... စိမ့်ဒါလီ ... လက်တဖက်က ... "ဗကျော်ဗ" ခေါင်းကို ဖွရင်း ... လက်တဖက်က ... ရှန်ပိန်ပုလင်းကို ... လှမ်းယူလိုက်တယ် ... လောင်းချလိုက်တယ် ... အိုး ... မိုက်တယ် ... ရှန်ပိန်တွေ ရွှဲစိုသွားတဲ့ ... စိမ့်ဒါလီ ... နို့ကြီးတွေကို ... "ဗကျော်ဗ" ... ခပ်ပြင်းပြင်း စုပ်ပစ်လိုက်တယ် ... ချိုလဲချိုတယ် ... သွေးလဲကြွတယ် ... "ဗကျော်ဗ" ... အားရပါးရကို စုပ်တာ ... လက်ကလဲ ... အောက်က ... ပေါင်လေးကို ဖြေးဖြေးလေးပွတ်တယ် ... အပေါ်က ကြမ်းသလောက် ... အောက်က နှေးနေတယ် ... ဖြေးဖြေးလေး ... စိမ့်ဒါလီရဲ့ အဖုတ်လေးကို ... အုပ်ကိုင်မိတယ် ... စိမ့်ဒါလီ ... သိမ့်ကနဲ ... ဖင်ကြီးကို ယမ်းခါပစ်လိုက်တယ် ...
"ဟာ ... ဟင့် ... မောင်ရယ် ... စိမ့် ... စိမ့် ... လေ ... ဟင့် ..."
"ဗကျော်ဗ" ... စိမ့်ဒါလီ အကွဲကြောင်းလေးကို ... လက်လေးနဲ့ ... ပွတ်ပေးတယ် ... စိမ့်ဒါလီ ပေါင်လေး ကားသွားတယ် ... အကွဲကြောင်းလေးက ... ပိုဟသွားတယ် ... အရည်လေးတွေက နဲနဲစိုနေပြီ ... အဖုတ်လေးက ... အမွှေးမရှိဘူး ... ပြောင်ရှင်းနေအောင် ... ရိပ်ထားတယ် ... အဖုတ်ရဲ့ ဘယ်ဘက်နားလေးမှာ ... ပန်းပွင့်ပုံလေး ... အနီရောင် ပွင့်ဖတ် လေးခုပါတဲ့ ပန်းပွင့်ပုံလေး ... "ဗကျော်ဗ" ... နို့ကြီးတွေကို တအားစို့နေရင်း ... တဖြေးဖြေး ... အောက်ကို ဆင်းလာတယ် ... ဗိုက်သားရှပ်ရှပ်လေးကို နမ်းတယ် ... စိမ့်ဒါလီ ချက်လေးက လှတယ် ... နမ်းချင်စရာလေး ... ချက်ကလေးကို ... လျှာလေးနဲ့ ကလိကြည့်တယ် ...
"အို ... မောင့် ... ယားတယ် ... ဟင့်"
"ဗကျော်ဗ" ... အနမ်းတွေက ... ဆီးခုံနားကို ကပ်လာတယ် ... မို့မို့ဖောင်းဖောင်းကြီးကို ... တချက်နမ်းလိုက်တယ် ... ရွှတ် ... စိမ့်ဒါလီ ကြက်သီးလေးတွေ ထသွားတယ် ... "ဗကျော်ဗ" ... အကွဲကြောင်းနားလေးကို ... ရောက်လာတယ် ... နမ်းတယ် ... အိကနဲ ပိသွားတယ် ... ဟာကနဲ ... အသံလေးထွက်ပြီး ... စိမ့်ဒါလီ ... ပေါင်လှလှလေးကို ကားပေးလိုက်တယ် ... "ဗကျော်ဗ" ... စိမ့်ဒါလီ အဖုတ်ကြီးကို ... သေချာကြည့်လိုက်တယ် ... လှတယ် ... မို့တယ် ... အတွင်းသားက ပန်းရောင်လေး .. ထိပ်ဝတွေက မမဲဘူး ... ဖြူတယ် ... အနံ့မရှိဘူး ... "ဗကျော်ဗ" ... ထိပ်ဝလေးကို ... တချက် နမ်းလိုက်တယ် ... စိမ့်ဒါလီရဲ့ အတွင်းသားတွေ ... လှိုင်းထန်ကုန်တယ် ... စိမ့်ဒါလီ ဆတ်ကနဲ ... ကော့တက်လာတယ် ... "ဗကျော်ဗ" စနမ်းပြီ ... နှုတ်ခမ်းသားစူစူလေး နှစ်ခုကို လက်နဲ့ ဖြဲပြီး ... လျှာလေးနဲ့ ... အောက်ကနေ အပေါ်ကို ... သိမ်းယက်ပစ်လိုက်တယ် ... ရှလွတ် ...
"အာ ... ဟာ ... မောင်ရယ် ..."
စိမ့်ဒါလီ ... တကိုယ်လုံး ကျဉ်တက်သွားအောင် ... ကောင်းလိုက်တာ ... အပေါ်ပိုင်းကတော့ ယမ်းခါသွားတာပဲ ... ခေါင်းအုံးအစွန်းကို ... အတင်းဆွဲထားပြီး ... အဖုတ်ကြီးကို ... အတင်းပဲ ကော့ပေးလိုက်တယ် ... "ဗကျော်ဗ" လျှာလေးကို ... အားထည့်ပြီး ခပ်စောင်းစောင်းလေး ... အကွဲကြောင်းအတိုင်း ပွတ်တယ် ...
"အာ ... မောင် ... မောင့် ... ဟင့် ... ရှီး ..."
"အို ... ကောင်းတယ် ... မောင် ... ကောင်းတယ် ... မောင် ... "
"ဗကျော်ဗ" နှစ်ခါသုံးခါလောက် ယက်လိုက်တာနဲ့ ... စိမ့်ဒါလီ ... အရမ်းထန်သွားတယ် ... ကောင်းလဲအရမ်းကောင်းတယ် ... မျက်နှာလေး နီရဲတက်လာတယ် ... စိမ့်ဒါလီ ... သူ့ပေါင်လေးကို ... ပိုကားပေးပြီး ... ဒကောက်ခွက်လေးကို ... လက်နဲ့ ဆွဲထားပေးလိုက်တယ် ... အဖုတ်ကြီးက ... ပိုပြီးဖောင်းလာတယ် ... အကွဲကြောင်းက ... ဖတ်ကနဲ ... ပိုပြီး ပြဲသွားတယ် ... "ဗကျော်ဗ" ... စိမ့်ဒါလီ ပေါင်းရင်းကို ... လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဖိထားပြီး ... စိတ်တိုင်းကျ ယက်ပစ်လိုက်တယ် ... အောက်ကနေ အပေါ်ကို လှန်ပြီး ... ယက်တယ် ... ဒီလိုမျိုးပေါင်ကို တအားကားထားတော့ ... အဖုတ်ကြီးက ထောင်ပြီး ... သိပ်ငုံ့စရာမလိုတော့ဘူး ... အကွဲကြောင်းလေး အဆုံးမှာ ... ခပ်စူစူလေး နီရဲနေတဲ့ ... စအိုဝလေးကိုလဲ ... လျှာလေးနဲ့ ကလိပေးတယ် ...
"ဟာ ... ဟေ့အေး ... မရွံဘူးလား ... အို ... မောင်ရယ် ... အာ ... အာ ... ရှီး ..."
မရွံပါဘူး ... "ဗကျော်ဗ" ... စိမ့်ဒါလီ ... စအိုဝလေးကို ... ကလိရင်း ... ဇွတ်ကနဲ ... လက်ညှိုးတချောင်း ... ထိုးထည့်လိုက်တယ် ...
"ဟာာ ... မောင် ... မောင် ... ကောင်းလိုက်တာ ... မောင်ရယ် ... ရှီး ..."
"သွက်သွက်လေး ... ဟင့် ..."
"ဗကျော်ဗ" ... အရည်တွေ တစိမ့်စိမ့်ထွက်နေတဲ့ ... အဖုတ်ကြီးထဲ လက်ထည့်ပြီး ... ခပ်သွက်သွက်လေး ... အ၀င်အထွက်လုပ်ပစ်လိုက်တယ် ... စိမ့်ဒါလီ ... အကြောပေါင်းတထောင် ... စိမ့်သွားအောင် ... ရမက်တွေ ထန်ကုန်တယ် ... အရည်တွေ ရွှဲနေတော့ ... အ၀င်အထွက်လုပ်တာ မြန်တယ် ... တချက်တချက် ... "ဗကျော်ဗ" ... လှိုင်ခေါင်းလေးထဲကို နှိုက်ကြည့်တယ် ... ဂျီစပေါ့ ... အတွင်းပိုင်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းအဖုလေးတွေ စုနေတဲ့နေရာ ... ဒီနေရာကို ... ထိမိဆွမိရင် ... မိန်းမတွေ အသဲခိုက်အောင် ... ကောင်းသွားစေတယ် ... ဟော ... တွေ့ပြီ ... အဖုလေးတွေကို ... စမ်းမိတယ် ... ပွတ်တာပေါ့ ...
"အာာ ... မောင် ... အာာာ ... ဟင့် ... မခံနိုင်ဘူးကွာ ... ဟင့် ... ရှီး ... ရှီး ... ဟင့် ..."
"ဗကျော်ဗ" ... အတင်းပွတ်တယ် ... နှိုက်တယ် ... အပေါ်ကလဲ ... အစေ့လေးကို ... စုပ်တယ် ... သကြားလုံးစုပ်သလို စုပ်တာ ... စိမ့်ဒါလီ ထွန့်ထွန့်ကို လူးရော ... ကော့ပျံနေအောင် ... ကော့ပေးထားပြီး ... သူ့နို့ကြီးကို ... သူ့လက်နဲ့ သူ ချေတယ် ... သိပ်မကြာပါဘူး ... ခေါင်းက ... ကြက်ကလေးလည်လိမ်သွားသလို ... လိမ်ပြီး ... အဖုတ်ကြီးကို ... အတင်းပဲ ကော့ပစ်လိုက်တယ် ...
"အ ... အ ... ထွက်ပြီ ... ထွက်ပြီ ... မောင်ရေ ... အရမ်းကောင်းတာပဲကွာ ... ရှီး"
ပွက်ကနဲ ပွက်ကနဲ ... အရည်တွေ လျှံကျလာတယ် ... စိမ့်ဒါလီ ရင်တွေ ဒုန်းကနဲ ဒုန်းကနဲ ခုန်ပြီး ... ၀ုန်းကနဲ ... ဖင်ကြီး အောက်ကို ပစ်ကျသွားတယ် ... မျက်စိလေးကို မှေးပြီး ... ကာမရဲ့အရသာ အထဋ်အထိပ်ကို ... မှိန်းပြီး ခံစားနေတယ် ...
"ကောင်းရဲ့လား ... စိမ့် ..."
"အရမ်းကောင်းတယ် ... မောင်ရယ် ... ရင်တွေတလှပ်လှပ်နဲ့ ... မောင်က ချစ်တတ်တယ်နော် ..."
"အင်း ... စိမ့် ... ကိုယ်အရမ်းထန်နေပြီ ... သွင်းပစ်လိုက်တော့မယ်ကွာ ... "
"သွင်းလေ ... သွင်း ..."
ပြောတာက နောက်ကျနေပြီ ... "ဗကျော်ဗ" ဒုတ်က ... ကွမ်းသီးခေါင်းက ... စိမ့်ဒါလီအဖုတ်ထဲကို ... သိမ့်ကနဲ ကျွံဝင်သွားပြီ ...
"ဟာ ... မောင်ရယ် ... ကောင်းလိုက်တာ ... ဟင့် ..."
Myanmar Books (18+) / Re: တစ်မိုးအောက် တစ်ယောက်ဖွား … (၁၈+)
« Last post by Had3s on October 07, 2011, 04:58:14 AM »
မောင်မောင်တင်ခဗျာ ပျော်လိုက်သည့် ဖြစ်ချင်း။ အစောပိုင်းက မျိုးသီရိနှင့် တွဲနေ၍ အမြင်မကြည်သော ကိုအောင်နိုင်ကိုပင် အောင်သွယ်တော်ကြီးဆိုပြီး ကျေးဇူးတင်သည်။ သူ့အဖို့လဲ အသက်၄၀ အထိ မစွံခဲ့သမျှ မျိုးသီရိနှင့် တွေ့မှ ရင်တဒိန်းဒိန်းခုန်ချင်းဖြစ်သည်။ ဒါကလဲ မောင်မောင်တင် မပြောနှင့်။ မျိုးသီရိကို တွေ့သူ ဘယ်ယောက်ျားသားမဆို ရင်ခုန်လောက်အောင် သူမက လှသည်။ ထူခြားသည်က မျိုးသီရိ၏ စနေနှစ်ခိုင်က အတော်ထွားသည်။ ထွားတာမှ ကျွဲကောသီးနှစ်လုံးကို ဖြတ်ကပ်ထားသည်နှင့်တူသည်။ မျက်စိထဲမြင်အောင် ပြောရရင် ဂျပန် AV ကားတွေထဲက ကောင်မလေးတချို့လောက် ရှိသည်။ စထွားခါကဆိုလျှင် ကိုအောင်နိုင် မှန်မှန်ဆွဲပေးမှုကြောင့် ဆိုကာ စိတ်ဆိုးသေးသည်။ နောက်တော့ ကိုအောင်နိုင်၏ သူနှင့်အတူတူ ခံနေသော တခြားကောင်မလေးတွေက မဖြစ်ဘဲ သူကသာ မတန်တဆထွားနေသည်ကို တွေ့မှ ဟိုမုန်းကြောင့်ဖြစ်မည်ဟု တွေးကာ စိတ်ပြေသွားသည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုတော့ ပြီးခဲ့သော လက မျိုးသီရ်ိတို့ မင်္ဂလာဆောင်ကြသည်။ ဒါကလဲ ကိုအောင်နိုင် အတင်းတိုက်တွန်း၍ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်သွားချင်း ဖြစ်သည်။ သူမဘာသာဆိုလျှင် မောင်မောင်တင်ကို တစ်နှစ်လောက် အချိန်ဆွဲထားလိုက်ချင်သေးသည်။ ကိုအောင်နိုင်က မျိုးသီရိကို မငယ်တော့ဘူးဟု ဖျောင်းဖြရသည့်အပြင် ပစ်မထားပါဘူးဟု ဂတိပေးလိုက်မှ အင်တင်တင်နှင့် သဘောတူလိုက်ချင်းဖြစ်သည်။ မောင်မောင်တင်ကတော့ ကိုအောင်နိုင်ကို ထိုင်ရှိခိုးမတတ် ကျေးဇူးတင်သည်။ အံမယ်..။ သူတို့ မင်္ဂလာဆောင်တွင်Best Man လုပ်ပေးဖို့ပင် မေတ္တာရပ်ခံ၏။ မျိုးသီရိကပင် ၀ိုင်းပြောရာ ကိုအောင်နိုင်လဲ မညင်းသာပဲ လုပ်ပေးလိုက်သည်။ မင်္ဂလာဆောင်တွင် လူများကတော့ သတိုးသမီးက သတို့သားနှင့် မလိုက်ပဲ Best Man နှင့်သာ ပိုလိုက်သည်ဟု နောက်ကွယ်တွင်ပြောကြသည်ကိုတော့ မောင်မောင်တင်ပြန်မကြား။ တချိန်လုံး မှိုရသည့် မျက်နှာနှင့် ပြုံးဖြီးဖြီး ချည်းသာဖြစ်နေသည်။
ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမှနေ၍ လမ်းသွယ်လေးကို ၀င်မိသည်နှင့် ကားများ အစီအရီ ရပ်ထားသည်ကို တွေ့လိုက်သည်။ ယဉ်ထိန်းတစ်ယောက်ကပင် ကားများကိုနေရာချပေးနေသည်။ ကိုအောင်နိုင်လဲ အော်ဒီအနက်ရောင်တစ်စီးနောက်တွင် အသာထိုးရပ်လိုက်ရင်း ကားပေါ်ကဆင်းသည်။ ပြီးတော့ ရှေ့က သွားနေသော အတွဲတစ်တွဲ နောက်ကနေ အသာလိုက်လာခဲ့သည်။ ကြည့်ရတာ သူတို့လဲ မျိုးသီရိတို့ အိမ်တက်ပါတီကို လာကြတာ ထင်သည်။ ဘောင်းဘီအိတ်ထဲကနေ ဟန်းဖုန်းကို ထုတ်ကာ “I’m here” လို့ message တော့ ပို့လိုက်သည်။
မီးရောင်စုံထွန်းထားသော ခြံထဲကို ရောက်သည်နှင့် အိမ်ဘေးမြက်ခင်းထဲတွင် အစီအရီခင်းထားသော စားပွဲလေးများကို တွေ့သည်။ လူတော်တော်များများပင် ရောက်နေကြလေပြီ။ ကိုအောင်နိုင် အသိတယောက်ကို တွေ့၍ နှုတ်ဆက်မည်ဟု ခြေလှမ်းပြင်လိုက်သည့်တွင် အိမ်ထဲက ထွက်လာသော မျိုးသီရိကို တွေ့လိုက်သည်။ ခရမ်းရောင် ၀တ်စုံလေးနှင့် အပြေးလေးတပိုင်း လျှောက်လာသော မျိုးသီရိ၏ အလှက ထင်းခနဲပေါ်သည်။ ထွားမို့၍ လူတိုင်းကငေးလောက်သော ရင်သားများမှာ မျိုးသီရိ ခြေလှမ်းတိုင်း န်ိမ့်ချည်မြင့်ချည် ဖြစ်နေ၏။ ကိုအောင်နိုင်၏ မျက်လုံးတွေက မျိုးသီရိကို စူးစူးရဲရဲ စိုက်ကြည့်သည်။ စိတ်အစဉ်ကမူ လွန်ခဲ့သော တစ်လကျော်ကျော်သို့ ပြန်ရောက်သွားသည်………………………
Posted by သူရိန်(နေရိပ်ညို) at 1:19 PM No comments:
Posted by သူရိန်(နေရိပ်ညို) at 1:16 PM5comments: